မိုးကောင်းကင်: January 2010
ဆရာ အတ္တကျော်ရဲ့ စာစုလေးတွေ ကို မိန်းကလေးများ အတွက် ပြန်လည် မျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကလေးမလေးတစ်ယောက် ကျွန်တော့်ဆီ ရောက်လာပြန်တယ်။
ကျွန်တော့်ဆီကိုရောက်ရောက်လာသူတွေ မနည်းလှပါဘူး။ ဒါပေမယ့်
မများဦးတောင်တိုးတိုးပြီးရောက်လာနေကြတာ တွေ့ရတော့ ကြည်နူးရတယ်။
လာကြတဲ့အထဲမှာ အင်မတန်နည်းတာကတော့ အပျိုပေါက်အရွယ် ကလေးမလေးတွေပါ။
သည်တစ်ခေါက်ရောက်လာတဲ့ ကလေးမလေးနဲ့ တွေ့ဖြစ်ချိန်မှာ
ကျွန်တော့်အတွက်ရေးစရာက ရလို့ သွားပြန်တယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ
သည်လိုပါ။ ကလေးမလေးမှာက ချစ်သူ ရှိတယ်။ ကလေးမလေးက အသက် ၁၈နှစ်၊
ဒုတိယနှစ်တက်နေတဲ့ကျောင်းသူလေး။ အဲဒါ သူ့ချစ်သူက သူ့ကို
ဆိတ်ကွယ်ရာသွားဖို့ မရမကခေါ်နေသတဲ့။ ကလေးမလေးကလည်း ငြင်းတယ်။
“သမီး အိမ်ထောင်မပြုချင်သေးဘူးဆရာ၊ သမီးမှာ ရည်မှန်းချက်တွေလည်း
ဘာဆိုဘာမှ မပြည့်စုံသေးဘူး။ မိဘတွေကိုလည်း သမီး လုပ်ကျွေးချင်သေးတယ်”
ဒါပေမယ့် သူ့ချစ်သူက ဇွတ်ခေါ်နေတယ်။ မလိုက်ရင်
ချစ်သူနဲ့ကွဲချင်ကွဲရလိမ့်မယ်တဲ့။ အဲဒါ ဘာလုပ်ရမလဲလို့ ကျွန်တော့်ကို
ကျွန်တော် ဘယ်လို ပြောမယ် မှတ်သလဲ။ တစ်ခေါက်တလေတော့
လိုက်သွားပါသမီးရယ်လို့ ပြောရမှာလား။ ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲ။ ကျွန်တော့်မှာလည်း
သမီးနဲ့။ကိုယ့်သမီးလေးကိုသာဆို ပြောဖြစ်မယ့် စကားကိုပဲ ပြောရပါတယ်။
“မှန်လိုက်တာ။ သမီး သိပ်မှန်တာပေါ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်က
တန်ဖိုးထားမှ ရမှာ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကိုယ်ပဲ
ထိန်းသိမ်းနိုင်တာ။ သမီး သိပ်တော်တာပဲ”လို့ ကျွန်တော်ချက်ချင်းပြောဖြစ်ခဲ့တယ်။
ကလေးမလေးက အချီးကျူးခံလိုက်ရလို့ ဝမ်းသာပုံ မပြဘူး။ မျက်လုံးလေး
ပေကလပ်၊ပေကလပ်နဲ့၊ ကျွန်တော့်ကို ကြည့်နေသေးတယ်။
“ဘာလဲ၊ သမီးက သူနဲ့ ကွဲသွားမှာ စိုးလို့လား”လို့ မေးလိုက်တော့
“ဒါဖြင့် သူ့အလိုကို လိုက်တော့မယ်ပေါ့”လို့ မေးပြန်တော့
“ဒါဆိုလည်း ရှင်းနေတာပဲ သမီးရယ်၊ အလိုမလိုက်လို့ ကွဲချင်လည်း
ကွဲပါစေ။ထိန်းသိမ်းရမှာက သမီးတာဝန်ပဲ”လို့ ပြောလိုက်ရပါတယ်။
အမှန်တော့ သည်ကလေးမလေး အပါအဝင် ဒါမျိုးကိစ္စနဲ့ ကျွန်တော့်ဆီ
ရောက်လာသူတွေလေး-ငါးယောက် မကတော့ပါဘူး။ သည်တစ်ယောက်ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်
ကျွန်တော်နဲ့လာတွေ့ချိန်အထိ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်နိုင်တာ
ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ ချစ်သူအလိုကျ မလိုက်လျောသင့်တာကို
သည်နေရာမှာ ယောက်ျားတွေအကြောင်းကို မိန်းကလေးတွေ
ယောက်ျားထဲကယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် သည်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့
တစ်စက်မှမကင်းတဲ့အပြင် ရည်းစားသက်စေ့ထားခဲ့ဖူးသူ ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်း
သည်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင် အပိုင်ပြောလို့ ရမယ်ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်အသက် ၁၉နှစ်အရွယ်မှာ ရည်းစားအဖြစ်
တွဲခဲ့သူမှသည် ၂၀ဝ၁ခုနှစ်နှစ်ဦးမှာ လမ်းခွဲလိုက်တဲ့
(အိမ်ထောင်ရှင်တန်မဲ့နဲ့ ထားခဲ့ဖူးတဲ့)ရည်းစားအထိ ရှိရှိသမျှ
ရည်းစားအားလုံးကို ဟုတ်ကဲ့… “ဆိတ်ကွယ်ရာ”ကိုခေါ်သွားဖူးတာချည်းပါပဲ
ခင်ဗျား။ [မယုံရင် ၁၉၇၆-၇၇ရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံတက္ကသိုလ်နှစ်လည်မဂ္ဂဇင်း
ထဲမှာ ကျွန်တော့် ပထမဆုံးရည်းစားအဖြစ် ထားခဲ့ဖူးသူကို ဆိတ်ကွယ်ရာ
အခေါ်ကောင်းလို့ဒုက္ခများတဲ့အကြောင်း ရေးထားတဲ့ ကိုယ်တွေ့ ဝတ္ထုလေးကို ရှာသာ
ဖတ်ကြည့်ကြပါ။ကျွန်တော့်ရဲ့ ခြေရာပြိုးပြောက် လွမ်းပွင့်
ကောက်သီကိုယ်တိုင်ကြုံဝတ္ထုတိုများ စာအုပ်ထဲမှာ ပါပါတယ်။]
ပြောချင်တာက သမီးရည်းစားရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် ယောက်ျားတွေဟာ
ဘာမှန်းကိုမသိဘူး။ ဆိတ်ကွယ်ရာကိုမှ ခေါ်မသွားရရင် မနေတတ်ကြပါဘူး။ အဲ…
လိုက်တဲ့သူကလိုက်လာပြီဆိုရင်လည်း အဲဒီ့ ကိုရွှေယောကျာ်းသားများဟာ
တိုးတိုး တက်ဖို့လည်း တစ်စက်မှ ဝန်မလေးတတ်ကြပြန်ဘူး။
အဲ… ခေါ်ရာကို မလိုက်ဘူးဆိုရင်လည်း မျက်နှာတော်ညို၊
အလိုမကျဖြစ်ပြီးအမျိုးစုံ ဂျီကျ၊ ဂျစ်တိုက်၊ မောင့်ကို မချစ်လို့လား၊
မယုံလို့လားစသဖြင့် မျက်ရည်ခံထိုး၊ အမျိုးမျိုး ပပ်ချွဲနှပ်ချွဲ
လုပ်တတ်တာလည်း အဲဒီ့ကိုရွှေယောက်ျားသားများပါပဲ ခင်ဗျာ။
ဒါဟာ အခုမှမဟုတ်ပါဘူး။ ခေတ်အဆက်ဆက်ကတည်းကပါ။ “လရောင်ကို
မကြောင်ဝံ့လို့၊သစ်ပင်အောက်ကို မှောင်ခိုကာရယ်၊ နှစ်ယောက်သား
တွေ့ကြရာဝယ်”ဆိုတဲ့ ဟိုးရှေးရှေးကတည်းက ယောကျာ်းနဲ့မိန်းမ သမီးရည်းစားဘ
နှစ်ယောက်ချင်းသာ တွေ့ချင်တဲ့ အာသီသက အဖိုမှာရော အမမှာပါ ရှိတတ်စမြဲပါ။
ဒါပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေ ချစ်သူနဲ့ နှစ်ယောက်ချင်း
တွေ့ချင်တာကလွတ်လွတ်လပ်လပ် တွတ်ထိုးချင်လို့ပါ။ နွဲ့ချင်၊ မီချင်လို့ပါ။
ဒါပေမယ့်အစ်ကို ကာလသားများကတော့ သူတို့ ချိန်းတဲ့နောက် ကောက်ကောက်
ပါအောင်လိုက်လာပြီဆိုကတည်းက သူလည်း ငါလိုပဲ၊ ငွေပင်လယ်
လက်ပစ်ကူးချင်စိတ်အပြည့်နဲ့လို့ ထင်ကုန်တတ်ကြပါတယ်။ အဲသလို
ချစ်သူကို ချစ်တာလေး တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲ
ယောက်ျားတွေမှာ ရှိတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ တုံ့ပြန်တာထက် ကိုယ့်ချစ်သူ
စိတ်ချမ်းသာစေချင်လို့စုံလုံးကန်းပြီး ဇွတ်မှိတ်ကြတာက အများစုပါ။
သည်မှာတင် မိန်းမတွေများနှာခေါင်းမပါရင် ဘာဖြစ်တယ်၊ ညာဖြစ်တယ်
အခုခေတ်ကျတော့ ပိုဆိုးပါတယ်။ ဗီဒီယို စက်တွေ ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ
အိုးမကွာ၊အိမ်မကွာလည်း ကြည့်စရာတွေက ပေါလာ၊ ဗှီစီဒီဆိုတဲ့
ပိုလို့ လွယ်လာပါတော့တယ်။ အတတ်သင်ဖို့ကျတော့ ကိုယ်နဲ့
ကိုယ့်တုန်းကလည်း ရည်းစားရှိလာရင် ဆိတ်ကွယ်ရာမှာ
တွေ့ဖို့ချိန်းခဲ့တာချည်းဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ့်နှမ၊ သူ့နှမ၊ ကိုယ့်သမီး၊
သူ့သမီးကျတော့ သတိ မပေးလို့က မဖြစ်တော့ဘူး။
အရွယ်ရောက်နေတဲ့ (၂၀ကျော်) မိန်းကလေးတွေ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်လိုက်ချင်လို့
လိုက်သွားမယ်ဆိုလို့ကတော့ သဘောပါပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်မို့
ဘယ်သူကမှ ကန့်ကွက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့
အကျိုးဆက်တွေကိုတော့ မမများ ကိုယ့်ဘာသာ သေချာစဉ်းစားသိရှိထားသင့်ပါတယ်။
(၁) ကိုယ့်ကို အလိုတူ အလိုပါအဖြစ် ယောက်ျားလေးဘက်က အလိုလို
(၂) လက်ကလေးကိုင်ရုံ၊ နဖူးကလေး နမ်းရုံ၊ ပခုံးကလေး
ဖက်ရုံလောက်နဲ့တင်ပီးမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်း ကြိုတင် တွက်ဆထားရပါမယ်။
သိပ်လျင်တဲ့ယောကျာ်းသားတွေဆိုရင် ဝရုန်းသုန်းကား မဟုတ်ဘဲနဲ့
နဖူးကလေး နမ်းရင်းနဲ့ အချိန်ဆွဲပြီး
“ကျုံးသွင်း”တတ်ကြတာမို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘယ်အချိန်မှာ ငိုက်ခနဲ
မသိလိုက်ရသူတွေလည်း ရှိတတ်တယ်။ ဒါတွေကို ကြိုမြင်ထားဖို့လိုတယ်။
ဒါက မလိုက်ခင်ကတည်းက သိနေရမှာပါ။ ဒါကို သိသိကြီးနဲ့ လိုက်ရင်တော့…
(၁) အလိုတူလို့ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ဒါမှမဟုတ်
(၂) မိမိစိတ် မိမိနိုင်နိုင်နင်းနင်းနဲ့
ဘယ်အတိုင်းအတာအထိလိုက်လျောမယ်လို့ ပိုင်းဖြတ်ပြီး ရပ်သင့်တဲ့အချိန်ကျရင်
ရပ်နိုင်စွမ်း ရှိလို့ရင်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သည်နေရာမှာ “ဟင့်အင်း၊ လုံးဝ မလိုက်လျောနိုင်ဘူး”လို့ ပြောတာ
(ဝါ)ငြင်းဆန်နိုင်တာဟာ အရည်အချင်းပါ။ အသိဉာဏ် ရှိတာပါ။ ရင့်ကျက်တာပါ။
နမူနာလေးနဲ့ ပြောပါရစေ။ ကလေးဘဝတုန်းက “မိဖြူနဲ့ ငါနဲ့ မခေါ်ဘူးဟ၊
နင်လည်းသူ့ကို မခေါ်နဲ့နော်”လို့ ပြောရင် လိုက်လျောမိတတ်ကြပါတယ်။
အရွယ်လေးရလာတော့ အဲဒါမျိုးလာပြောရင် “ဘာဆိုင်လို့တုန်း၊
နင့်ဘာသာမခေါ်ချင်မခေါ်နဲ့ပေါ့။ နင်မခေါ်တာနဲ့ ငါလည်း
မခေါ်ဘဲနေရမယ်ဆိုတာကတော့အဓိပ္ပာယ် မရှိဘူးဟာ”လို့ ပြောဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
အသိဉာဏ်ရှိမှုကို ပြသတာ မဟုတ်ဘူးလား။
အလားတူပဲ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးတစ်ခုခုကို စမ်းကြည့်ရအောင်လို့
သူငယ်ချင်းကအဖော်စပ်လာချိန်မှာလည်း “ဟင့်အင်း”လို့ ငြင်းနိုင်တာဟာ
အသိဉာဏ်ရှိတာကိုပြတာပါပဲ။ ကလေးဘဝတုန်းက သူများ ပစ္စည်းသော၊ ဘာသော
မသိ၊လိုချင်ပြီဟေ့ဆိုရင် တဂွဲဂွဲ အော်ငိုတတ်ကြပေမယ့် အသက်ကလေး
ရလာတာနဲ့အမျှသူများပစ္စည်းကို ပေးသူက ပေးလို့ အလကား ရမယ်ဆိုရင်တောင်
ချိန်ဆကုန်ကြတာ၊ပေးကမ်းမှုရဲ့ နောက်ကွယ်က ငါးမျှားချိတ်ကိုပါ
ဒါကြောင့် ကိုယ့်ချစ်သူက အဆင့်တွေ ကျော်ဖို့
အားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းကိုယ့်ဘက်က ယတိပြတ် ငြင်းပယ်နိုင်တာဟာ ကိုယ့်မှာ
အသိဉာဏ် မနုံ့နဲ့ရာ၊ရင့်ကျက်ခိုင်မာတဲ့ စိတ်ဓာတ်ရှိရာ ရောက်တာမို့ ကိုယ်
အဲ… အဲသလိုမှ မဟုတ်ဘဲ၊ လိုက်လည်း လိုက်သွားမိတယ်၊
ငြင်းဖို့ကလည်းအားနာတယ်၊ ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ကို အမျိုးစုံ ဂျီကျ၊
(၁) ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ကို တန်ဖိုးထားတော့မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။လုံးလုံး
တန်ဖိုးမထားတော့တာမျိုး မဟုတ်ရင်တောင် ကိုယ့်ကို
အရင်ကလောက်တန်ဖိုးထားတော့မှာ မဟုတ်တာတော့ သေချာပါတယ်။
လွယ်လွယ်နဲ့ရရင်ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းမဖြစ်ဖြစ် လူ မှန်ရင်
သိပ်တန်ဖိုးမထားတတ်တာသဘာဝပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဘက်က လွယ်လွယ်
လိုက်လျောမိလို့ကိုယ့်ဈေးပျက်သွားတာ၊ သူ့ဘက်က တန်ဖိုးမထားတာဟာ
(၂) တစ်ခါလိုက်လျောမိပြီဆိုတာနဲ့ အခါအခါ
(၃) သည်အထဲမှာမှ အရေးအကြီးဆုံး အချက်၊
အဓိကအကျဆုံးအချက်ကကိုယ့်ချစ်သူဆိုပေမယ့် ကိုယ်နဲ့ တစ်အိမ်တည်း
ကိုယ့်မျက်စိအောက်မှာ ရှိနေသူမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်သူ့နောက်ကြောင်း
ရာဇဝင်ကို သူပြောသလောက်သာသိထားရတာပါ။ သူဟာ ကိုယ့်ရှေ့မှာ
ဘယ်လိုအမျိုးသမီးတွေနဲ့ ယဉ်ပါးခဲ့မှန်းကိုယ် ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ
အမှန်အတိုင်း မသိနိုင်ပါဘူး။ သည်အခါမှာ သူ့မှာအိပ်ခ်ျအိုင်ဗှီဆိုတဲ့
ကုရာနတ္ထိရောဂါပိုး ရှိနေမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုပါအလိုလို ကူးစက်လာမယ့်
အန္တရာယ်ကြီးက ကျောချမ်းစရာကြီးပါ။အိပ်ခ်ျအိုင်ဗှီပိုး ရှိသူတွေမှာ
ချိုပေါက်နေတာမဟုတ်ဘဲ သူလို ကိုယ်လိုသွားသွားလာလာ၊ ကျန်းကျန်းမာမာမို့
သတိချပ်ကြစေလိုပါတယ်။အစီအစဉ်အတိုင်း အမှတ်စဉ်ထိုးပြီး ပြောနေလို့သာ ဒါက
နံပါတ်(၃)ဖြစ်သွားတာပါ။ တကယ်တော့ သည်အချက်ဟာ ထိပ်ဆုံး
(၄) နောက်ထပ်အန္တရာယ်ကတော့ တခြား လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်ရောဂါတွေလို့ခေါ်တဲ့
ကာလသားရောဂါ အမျိုးမျိုး ကူးစက်လာနိုင်စရာ ရှိတာတွေပါပဲ။
ဒါ့အပြင်ရေယုန်ပေါက်တာလို၊ အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုး၊ စီပိုးလိုဟာတွေလည်း
ကူးစက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေကလည်း လူကောင်းပကတိတွေဆီမှာခိုအောင်းနေနိုင်တဲ့
မောင်မင်းကြီးသားများက တာဝန်ယူရင် တော်ရဲ့၊ တာဝန်မယူရင်
မမများပဲအကျိုးနည်းရမှာပါ။ တာဝန်ယူတဲ့အခါမှာလည်း ကဲတုန်းက သူတို့ပဲ
ဇွတ်ကဲခဲ့သူယောကျာ်းသားများပေမယ့် ကိုယ်ဝန်ကြောင့် ယူလိုက်ရရင်
အဲဒီ့မိန်းမအပေါ်မှာအခြောက်တိုက် ညိုးတတ်တဲ့ယောက်ျားတွေလည်း မျက်စိနဲ့
တပ်အပ် မြင်ဖူးပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ ကိုယ်ဝန်ကြောင့် ကိုယ့်ကို ယူလိုက်တဲ့
ကိုယ့်အပေါ်မှာ အလိုလို အသာစီး ယူသွားတတ်တယ်။
တာဝန်မယူတဲ့သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမျိုးကျတော့ ဘဝပျက်သွားနိုင်တာ အထူး
ဒါကြောင့် ချစ်သူရည်းစား ထားနေကြတဲ့ မိန်းကလေးများအနေနဲ့
ကိုယ့်ချစ်သူကကိုယ့်ကို ဆိတ်ကွယ်ရာကို ခေါ်ရင်၊ ဆိတ်ကွယ်ရာမှာ တွေ့ဖို့
ချိန်းရင်သတိထားကြစေချင်ပါတယ်။ သည်အချက်တွေကို လေးလေးနက်နက်
သည်အတွက် ချစ်သူနဲ့ ကွဲရရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့
မေးစရာရှိပါတယ်။ကျွန်တော့်စာအစမှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ကလေးမလေးကလည်း
ကျွန်တော် ဖြေလိုက်ပါတယ်။ အဲသလို အလိုမလိုက်လို့
ကွဲသွားမှတော့ကိုယ့်ချစ်သူဟာ ကိုယ့်ကို တကယ်ချစ်တာမဟုတ်မှန်း၊
ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုယ်လက်နှီးနှောမှုကိုသာ လိုချင်မက်မောမှန်း အလိုလို
သက်သေပြလိုက်ရာရောက်ပြီးသားမို့ တကယ်တမ်းမှာ အဲလိုလူမျိုးနဲ့ လွဲသွားတာဟာ
အစားထိုး လို့ရပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ပျက်သွားတဲ့ဘဝအနေအထားကိုတော့ ဘာနဲ့မှ
အဖတ်ဆယ်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ဆိုလိုတာက
လက်ကိုင် မထားကြစေချင်ဘူး။လူတွေအများကြီးနဲ့ ပေါင်းပြီးမှ ဘယ်ဟာက
သူငယ်ချင်းကောင်း၊ ဘယ်ဟာကသာပေါင်း ညာစား၊ ဘယ်ဟာက အပေါ်ယံလို့
ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်။ ဆွေမျိုးတွေတစ်လှေကြီး ကြားမှာလည်း ဘယ်သူက
မိတ်ဆွေကောင်း၊ ဘယ်သူက အရေးဆို
အားမကိုးရဘူး၊ ဘယ်သူက ဖက်လှဲတကင်း မနေတတ်ပေမယ့် အရေးကျအားကိုးရတယ်စသဖြင့်
ပေါင်းရင်းနဲ့မှ သိလာပြီး ဘယ်သူကဖြင့်ကိုယ်နဲ့
အများထဲက ရွေးပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ယူရတတ်စမြဲပါ။
ချစ်သူရည်းစား၊ အိမ်ထောင်ဖက်ဆိုတာလည်း နတ်ပြည်က
လာတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။လူထဲက လူတွေချည်းပါပဲ။ အဲဒီ့ လူတွေထဲက
လင်ကောင်တစ်ယောက်လို့ ဆိုထားခဲ့တဲ့ မြန်မာစကားဟာ အင်မတန်
အဲတော့ အပျိုမတို့အနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ ချစ်သူရည်းစားက
ကိုယ့်ကိုဆိတ်ကွယ်ရာမှာ တွေ့ဖို့ ချိန်းဆိုမယ်၊ ခေါ်သွားမယ်ဆိုရင်
သဘောမလွယ်မိမှဒူးနဲ့ မျက်ရည် မသုတ်ရမှာကို တွေးတတ်နေစေချင်လှပါတယ်။
ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုယ့်ဘဝကိုလည်း ကောင်းအောင်၊ ဆိုးအောင်မိနစ်ပိုင်း၊
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 6:57 PM0comments Links to this post
ဒီစာစုလေးတွေဟာ ဘယ်အချိန်က ဘယ်သူ့ထဲက နေမှ ကျွန်တော့်ထဲ ရောက်နေမှန်း မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ လေ့လာမှတ်သားစရာလေးတွေဖြစ်လို့ ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ခြင်းပါ။ စာရေးသူ၏ အမည် မသိလို့ မဖော်ပြနိုင်တာကိုတော့ ခွင့်လွှတ်ပါလို့ တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျ.။
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 7:55 PM0comments Links to this post
စိတ္တဇ ဆေးရုံမှာ စိတ္တဇ ဝေဒနာရှင် လူနာ အမျိုးသမီး တဦးနှင်. အမျိုးသား တစ်ဦး ရှိပါသည်။ တနေ. သူတို.၂ယောက် အတူလမ်းလျှောက်နေတုန်း ဆေးရုံရဲ.ရေကူးကန်နား ရောက်တော. အမျိုးသား က ကန်ထဲသို. ခုန်ဆင်းချလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော. ရေနစ်တော.တာပဲ။ ဒါနဲ. အမျိုးသမီး ကလဲ အလျှင်အမြန်ခုန်ဆင်းပြီး ကုန်းပေါ်သို.ဆွဲတင် ကယ်ဆယ် လာခဲ.ပါတယ်။
အမျိုးသမီးရဲ. ကောင်းမွန်တဲ.ပြုမူချက်ကြောင်.၊ စိတ်ပြန်လည် လာသည်မှတ်ကာ ဆရာဝန်ကြီး က သူ.အား ဆေးရုံက ဆင်းခွင်.ပေးဖို. ခွင်.ပြုလိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ. ဆရာဝန်ကြီးကိုယ်တိုင် ထိုအမျိုးသမီးဆီသွားပြီး
ဆရာဝန် – နေကောင်းလား ခင်ဗျာ။ ခင်ဗျားကို သတင်းကောင်း တခု နဲ. သတင်းဆိုးတခု ပြောစရာရှိတယ်ဗျ။ သတင်းကောင်းကတော. ခင်ဗျား ပုံမှန်လူတွေ လို စိတ်ပြန်လည်လာလို. ဆေးရုံက ဆင်းခွင်.ပေးလိုက်မယ်။ သတင်းဆိုးကတော. ခင်ဗျားကယ်ခဲ.တဲ. အမျိုးသားလူနာ ခုနလေးကပဲ ရေချိုးခန်းထဲမှာ တံဘတ် နဲ. ဆွဲကြိုးချပြီး ကိုယ်.ကိုယ်ကိုယ် အဆုံးစီရင်သွားရှာတယ်။ စိတ်မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာ။
အမျိုးသမီး – အော်ဟုတ်လား၊ သူ.ဖာသာသူ အဆုံးစီရင်တာ မဟုတ်ပါဘူးရှင် ၊ ကျွန်မကိုယ်တိုင်သူကို. ရေတွေ စိုနေလို. ခြောက်သွားအောင် လှန်းပေးလိုက်ခဲ.တာပါ။
ကလေး နှစ်ယောက် ဆေးခန်းတွင် ဆေးစစ်ရန် ထုိင်စောင်.နေကြသည်။ နှစ်ယောက်မှာ တစ်ယောက်က စတင် ငိုးကျွေးပါတော.သည်။
ပထမကလေး – မင်းဘာလို.ငိုနေတာလဲ။
ဒုတိယကလေး – ငါဒီကို သွေးလာစစ်တာဟ။
ပထမကလေး – အဲဒါ ငိုစရာလား။
ဒုတိယကလေး – သွေးစစ်ရင် ကျွန်တော့ လက်ညိုးကို ဆရာဝန်က အပ်နဲ.ဖောက်မှာလေ။
ထိုအခါမှာတော. ပထမ ကလေး က စတင်ငိုကြွေးပါတော.သည်။ ဒီတော့ ဒုတိယ ကလေးက အံ့အားသင့်စွာဖြင်.။
ဒုတိယကလေး – မင်းက ဘာလို.ငိုရပြန်တာလဲ။
ပထမကလေး – ငါက ဒီကို ဆီးလာစစ်တာလေ။ ဗြဲဗြဲ
ဒီတသက်တော့ ကလေးအဖေ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး
စားသောက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်တွင်ဖြစ်သည် ဂျပန် ဆာမူရိုင်: ၃ ယောက် တစ်ဝိုင်းထဲ ထိုင်ပြီ: စားသောက်နေကြသည် ။
စားသောက်နေတုန်း ယင်ကောင် တစ်ကောင်က စားပွဲဝိုင်းပေါ်ဖြတ်ပျံ သွားသည်။
ဆာမူရိုင်: တစ်ရောက်က သူ.ဓါး ကို ဖျတ်ခနဲ ဆွဲထုတ်ပြီး ယင်ကောင် ကိုခုတ်ချလိုက်သည်။
ယင်ကောင် ၂ ပိုင်းပြတ်ပီး ကျလာသည် ။ ဆိုင်ထဲကလူတွေအားလုံး အံ့အားသင့် ကုန်သည်။
(ဆာမူရိုင်: ဆိုတာမျိုးက ဓါးခုတ်အင်မတန်မြန် သကိုး ။ )
အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ယင်ကောင် နောက်တစ်ကောင်က ပျံ လာပြန်သည် ။ ဒုတိယ ဆာမူရိုင်: ကလည်း အားကျမခံ ဓါးကို ဆွဲထုတ်ပြီး ယင်ကောင် ကိုခုတ်ချလိုက် သည်။ ယင်ကောင် ၄ ပိုင်းပြတ်ြပီးကျလာသည် ။ လူတွေလည်းပါးစပ်အဟောင်း သားဖြစ်ကုန်သည်။
ခဏကြာတော့ ကံဆိုးသူမောင်ရှင်…. နောက်ထက်ယင်ကောင် တစ်ကောင်ပျံသန်းလာပြန်သည်။ ပရိတ်သတ်တွေလည်း
တတိယ ဆာမူရိုင်: ဘာလုပ်ပြဦးမလဲဆိုတာ အင်မတန်စိတ် ဝင်စားနေကြပြီ။ တတိယ ဆာမူရိုင်: က သူ.ဓါးကို ဖျတ်ဆို ဆွဲထုတ် ပြီး ဓါးအိမ်ထဲ ပြန်ထည့်လိုက်သည်။ ( မြန်လွန်းလို့ ခုတ်လိုက်တာတောင်မမြင်လိုက်ရဘူး ။)
လူတွေလည်း စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ယင်ကောင် ကိုလိုက်ကြည်တော့ ကိုရွှေယင်ကောင်က ဟန်မပျက် ဆက်ပျံ နေသည်။့ လူတွေကစိတ်ဓာတ်ကျသွားသည် ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ တတိယဆာမူရိုင်: ပြောလိုက်သည့် စကားကြောင်. ပရိတ်သတ် ကြီး ဘာပြောရမှန်းမသိဖြစ်ကုန်ကြသည် ။ တတိယဆာမူရိုင်: က
” ဒီကောင် ပျံ တာတော့ ပျံ နိုင် ပါတယ် ..ဒါပေမယ့် ဒီတသက်တော့ ကလေးအဖေ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး”
သိပ္ပံ အတန်း တခုတွင် လက်တွေ.ချိန်၌ ပိုးကောင် ၄ ကောင်အား ဖန်အိမ် တခုစီတွင် ထည်.၍ စမ်းသပ် ကျရာဝယ်
ပထမ ပိုးကောင် ကို အရက် ထည်.ထားတဲ့ ဖန်အိမ် မှာ ထည်.ထားတယ်။
ဒုတိယ ပိုးကောင် ကို ဆေးလိပ်ငွေ.တွေ ဖြည်.ထားတဲ့ ဖန်အိမ်မှာ ထည်.ထားတယ်။
တတိယ ပိုးကောင် ကို သုတ်ရည်ထည်.ထားသော ဖန်အိမ်မှာ ထည့်ထားတယ်။
စတုတ္တ ပိုးကောင် ကို မြေသြဇာ ထည်.ထားသော ဖန်အိမ်မှာ ထည့်ထားတယ်။
နောက်တနေ.မှာတော့ ကျောင်းသားတွေ အဖြေကို သွားကြည့်ကျရာဝယ်။
အရက် ထည့်ထားတဲ့ ဖန်အိမ် က ပိုးကောင် သေသည်။
ဆေးလိပ်ငွေ.တွေ ဖြည့်ထားတဲ့ ဖန်အိမ် က ပိုးကောင် သေသည်။
သုတ်ရည်ထည့်ထားသော ဖန်အိမ် က ပိုးကောင် သေသည်။
မြေသြဇာ ထည့်ထားသော ဖန်အိမ် မှ ပိုးကောင် အသက်ရှင်နေသေးသည်။
ဆရာ – ကဲတပည့် တို. ဒီ လက်တွေ. သင်ခန်းစာ ကနေ ဘာတွေ လေ့လာ ခဲ့ရသလဲ သိတဲ.သူလက်ညိူးထောင်။
တပည်. – ကျွန်တော် လေ.လာ ခဲ့တာကတော့ ‘သင်ဘယ်လောက်ပဲ အရက်သောက်၊ ဆေးလိပ်သောက်၊ မိန်းမ၊ယောင်္ကျား ဘယ်လောက် ရူပ်ရူပ် ပိုးထိမှာ မပူရတော.ဘူး’ ။ ဟုတ်တယ် မလား ဆရာ။
ဆရာမ – ခြံစည်းပေါ်မှာ ငှက် ၅ ကောင် နားနေတယ်။ တကယ်လို. တယောက် က သေနတ်နဲ. တချက် ပစ်လိုက်ရင်။ ငှက်ဘယ်နှကောင် ကျန်မလဲ။ ကဲ ဂျော်နီ ဖြေစမ်း။
ဂျော်နီ – အမျိုးသမီး ၃ ယောက် ခုံတန်းရှည်ပေါ်မှာ ရေခဲမုန်.ထိုင်စားနေကျတယ်။ ပထမတစ်ယောက် က ရေခဲမုန်. ကို ဘေးကနေ လျှာ နဲ. လျှက်နေတယ်။ ဒုတိယ တစ်ယောက် ရေခဲမုန်.ကို အပေါ်က နေ အားရပါးရ စုပ် နေတယ်။ တတိယ တစ်ယောက် က ရေခဲမုန်.ကို ကိုက်စားနေတယ်။ ဘယ်တယောက်က အိမ်ထောင်သည် လို.ထင်လဲ ဆရာမ။
ဆရာမ – အပေါ်က နေ အားရပါးရ စုပ် နေတဲ. သူက အိမ်ထောင်သည် ပေါ.ကွယ်။
ဂျော်နီ – မှားတယ်ဆရာမ ၊ သူတို.ထဲ က လက်ထပ် လက်စွပ်ရှိတဲ.သူ က အိမ်ထောင်သည် ပါ။ ဒါပေမယ်. ကျွန်တော် ဆရာမ အတွေးအခေါ်ကို သဘောကျတယ်။
ဆရာ – မောင်ပု မင်း ရဲ. “ကျွန်တော်.ရဲ. ခွေး” ဆိုတဲ. essay က မင်းအစ်ကိုရေးတာ နဲ. တထပ်ထဲပါလားကွ။ မင်းကူးချ တာလား။မှန်မှန်ပြောစမ်း။
မောင်ပု – ကူးမချပါဘူး ဆရာ၊ ဒါပေ.မယ်. ခွေးက အဲ.ခွေးပဲလေ။
ဆရာ – မောင်ပု၊ မင်းအဖေ မှာ ပိုက်ဆံ ၁၀ ရှိတယ်။ မင်းက သူဆီက ၆ ကျပ် မုန်.ဖိုးတောင်းရင်။ မင်းအဖေ ဆီမှာ ဘယ်လောက်ကျန်မလဲ။
မောင်ပု – ၁၀ ပါ ဆရာ။
ဆရာ – မင်း က သချာင်္ ကို နားမလည်ဘူးပဲ။
မောင်ပု – ဆရာ လဲ ကျွန်တော်.အဖေ ကို နားမလည်ပါဘူး။
ဆရာ – မာရီယာ ထွက်ခဲ.၊ ဟောဒီ ကမ္ဘာမြေပုံ ကနေ အမေရိကား တိုက်ကို ထောက်ပြစမ်း။
မာရီယာ – ဒီမှာ ပါ ဆရာ။
ဆရာ – မှန်တယ်။ ကဲ ကလေးတို.ရေ အမေရိကား တိုက်ကို ဘယ်သူရှာဖွေ တွေ.ရှိခဲ. သလဲ။
အတန်း – မာရီယာပါ ဆရာ။
ဆရာ – မင်းဘာလို. ကျောင်းနောက်ကျတာလဲ။
တပည်. – ကျောင်းလမ်း ထိပ် က ဆိုင်းဘုတ် ကြောင်.ပါ ဆရာ။
ဆရာ – ဘာ ဆိုင်းဘုတ် တုန်း။
တပည်. – ကျောင်းရှိသည်၊ ဖြေးဖြေးမောင်း ဆိုတဲ.ဟာလေ။
ဆရာ – မောင်ပု၊ ရေ ရဲ. ဓါတုဗေဒ ဖော်မြူလာ ကိုပြောစမ်း။
မောင်ပု – H I J K L M N O
ဆရာ – ဘာတွေ လာပြောနေတာလဲ။
မောင်ပု – ဆရာပဲ မနေ.က သင်တယ်လေ. H to O ဆို။
fwdmail မှ.တဆင့်ပြန်လည် မျှဝေသည်။
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 7:54 PM0comments Links to this post
ဒီပုံပြင်က ဂျပန်မှာ တစ်ကယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ ဖတ်ရပါတယ်။တစ်ခါက လူတစ်ဦးသည် အိမ်ပြင်ရန်အတွက် အိမ်နံရံများကို ဖျက်ချခဲ့သည်။
သံချောင်းတစ်ချောင်းနှင့် ရိုက်မိနေသည်ကို ထူးဆန်းစွာ တွေ့မိသည်။ မလှုပ်သာ
မခံသာ သနားစရာ အိမ်မြှောင်အား ရိုက်မိနေသော သံချောင်းကို သူသေချာ
ကြည့်လိုက်မိသည်။ ထို သံချောင်းမှာ လွန်ခဲ့သော (၁၀)နှစ် အိမ်ဆောက်စဉ်က
ရိုက်ခဲ့သော သံဖြစ်ကြောင်း သူအံသြစွာ တွေ့လိုက်သည်။
(၁၀)နှစ်အတွင်း အိမ်မြှောင်ဘယ်လို အသက်ရှင်ခဲ့သလဲ… မှောင်မဲနေတဲ့ နံရံအတွင်း
မသွားနိုင် မလှုပ်နိုင်ဘဲ အသက်ရှင်ဖို့က သိပ်မလွယ်ကူလှပေ။ အိမ်မြှောင်
မည်ကဲ့သို့ အသက်ရှင်နေခဲ့သည်ကို သူအရမ်း သိချင်နေမိသည်။ နံရံကို ဆက်မဖျက်တော့ဘဲ
(၁၀)နှစ် အတွင်း အသက်ဆက် ရှင်နေသော အိမ်မြှောင်ကို သူစူးစမ်းခဲ့သည်။
သိပ်မကြာလိုက်ပါ… အစာကိုက်ချီထားသော အိမ်မြှောင် နောက်တစ်ကောင်ကို သူ
တွေ့လိုက်မိသည်။ သူခဏသာ မင်သက်သွားမိသည်။ (၁၀)နှစ်လုံးလုံး မပျက်မကွက်
အစားကိုက်ချီ ကျွေး မွေးခဲ့သော နောက်အိမ်မြှောင်ဟာ ဒီအိမ်မြှောင်နဲ့
ဘာတော်သလဲ… ဒါဟာ ဘယ်လို မေတ္တာမျိုးလဲ…. အဲဒီအိမ်မြှောင်ဟာ သူရဲ့
မိသားစုလား… သူငယ်ချင်းလား… မောင်နှမလား…. ဒါမှမဟုတ်…..
မေတ္တာနဲ့ နားလည်မှုစိတ်တွေကတော့ ဝေး…..ဝေး….ဝေး….လို့။
( ဒီပုံပြင်လေးမှာပါတဲ့ အကောင်ဟာ အိမ်မြောင်လို့ လဲမထင်ဘူး …
တောက်တဲ့လိုအကောင်မျိုးပဲ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ထင်တယ် … ၁၀
နှစ်လောက်အသက်ရှည်တာရယ် .. အမြီးက ပြတ်မထွက်တာတွေ ရယ်ဆိုတာ က အိမ်မြောင်မှာ
မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ .. တောက်တဲ့ ပဲဖြစ်ဖို့ များပါတယ် …. ဒါပေမယ့်ဘာပဲ
ဖြစ်ဖြစ်ပါ .. သူ ပေးချင်တဲ့အသိလေးကတော့ ကောင်းပါတယ်ဗျာ )
fwdmail ..မှရသော စာစုလေးအား ပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 6:42 PM0comments Links to this post
ဒီဥာဏ်စမ်းကို ဖတ်သူဖြေဖူးသူတွေ ရှိကြမှာပါ။ မသိသေးသူတွေအတွက် ဦးနှောက်လေးတွေ လှုပ်ရှားကြည့်နိုင်အောင် ထပ်ဆင့်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ အောက်က မေးခွန်း (၄)ခုကို ဖတ်ပြီး စဉ်းစားချိန် မပေးဘဲ ချက်ချင်းဖြေကြည့်ပါ။ သင့်ဦးနှောက် ဘယ်လောက် ပြေးနိုင်မလဲ?
မေးခွန်း (၁) သင်ပါဝင်တဲ့ အပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ နံပါတ်(၂)ကို သင်ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီဆိုရင် သင်ဟာနံပါတ် ဘယ်လောက်မြှောက်လဲ?
အဖြေ နံပါတ် (၁) လို့ ဖြေခဲ့ရင် သင့်အဖြေဟာ မှားသွားပါပြီ။ နံပါတ် ၂ကိုပဲ ဖြတ်ခဲ့တာလေ… နံပါတ် ၂ နေရာကိုပဲ သင်ရမှာပေါ့။
မေးခွန်း (၂)ကို ဖြေတဲ့အခါ မေးခွန်း(၁)လောက် အချိန်မပေးပါနဲ့။
မေးခွန်း (၂) သင်ပါဝင်တဲ့ အပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ နောက်ဆုံးလူကို သင်ဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်ဆိုရင် သင်ဟာနံပါတ် ဘယ်လောက်မြှောက်လဲ?
အဖြေ နောက်ကရေရင် ဒုတိယလို့ သင်ဖြေအုန်းမလား? ဒါဆိုရင် မှားပြန်ပြီနော်။ နောက်ဆုံးလူပါဆိုမှ သင်ဘာဖြစ်လို့ နောက်ဆုံးကို ပြန်ပြေးချင်ရသလဲ?
မေးခွန်း (၃)က အလှည့်အစား ပုစ္ဆာလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ ဘာအကူမှ မယူဘဲ အောက်ကပေးထားတဲ့ ဂဏန်းတွေကို စိတ်တွက်နဲ့ပဲ တွက်ကြည့်ပါ။
မေးခွန်း(၃) ၁ဝဝဝ ကို ၄ဝပေါင်းပါ၊ ၁ဝဝဝ ထပ်ပေါင်းပါ၊ ၃ဝ ထပ်ပေါင်းပါ၊ ၁ဝဝဝ ထပ်ပေါင်းပါ၊ ၂ဝ ထပ်ပေါင်းပါ၊ ၁ဝဝဝ ထပ်ပေါင်းပါ၊ ၁ဝ ထပ်ပေါင်းပါ စုစုပေါင်း ဘယ်လောက်ရမလဲ?
အဖြေ အဖြေက ၅ဝဝဝ လား? အမှန်က ၄၁ဝဝ ဖြစ်တယ်။ မယုံရင် ချတွက်ကြည့်ပါ။
ဒီနေ့ဟာ သင့်အတွက် ပြဿဒါးနေ့ ဆိုခဲ့ရင်တောင် မေးခွန်း(၄)ကို သင်ကောင်းကောင်း ဖြေနိုင်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
မေးခွန်း(၄) Mary အဖေ့မှာ သမီး ၅ယောက်ရှိတယ်။ ပထမသမီးက Nana၊ ဒုတိယသမီးက Nene၊ တတိယသမီးက Nini၊ စတုတ္ထသမီးက Nono၊ ပဉ္စမ သမီးနာမည်က ဘာလဲ?
အဖြေ အဖြေက Nunu လား? လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ မေးခွန်းကို ထပ်ဖတ်ကြည့်ပါ Mary ဖြစ်ပါတယ်။
မဖြေရသေးသူတွေလည်း ဝင်ဖြေလို့ရအောင် အဖြေကို အဖြူရောင်စာလုံး သုံးထားပါတယ်။ အဖြေတိုက်ချင်ရင် မောက်စ်နဲ့ အဖြေဆိုတဲ့ နောက်က စာကြောင်းတွေကို select လုပ်လိုက်ပါ။
အားလုံးအတွက် အပျင်းပြေလေးပါ။ အားလုံးတော်ကြပါတယ်။ တပျော်တပါး ဝင်ဖြေကြတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုသူရ ပို့ပေးသော မေးမှ ပြန်လည် ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 8:46 PM0comments Links to this post
ဒါကတော့ အင်တာနက်ဆိုင်တွေ Net Game ဆိုင်တွေ မှာ အသုံး ပြုကြတဲ့ Cafesuite Software လေးပါ။ Crack ဖိုင်လေးပါ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အသုံးပြုနည်း ကတော့ ကျွန်တော်လည်း သေချာ မသိလို့ ထည့်မပေးတော့ပါဘူး။
CafeSuite 3.49 (15.8MB)
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 6:40 PM0comments Links to this post
သီဟိုဠ်ကျွန်းမှာ တကယ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ကို အရင်ပြောပြရအောင်ပါ။
တစ်ခါတုန်းက သီဟိုဠ်ကျွန်းအနုရာဓမြို့နဲ့ မနီးမဝေး မဟလမြို့လေးမှာ ဣဿရမဟာ တိဿ ဆိုတဲ့ သူဌေးတစ်ယောက်ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။
သူဌေးက အလှူအတန်း ၀ါသနာပါသလို သူဌေးကတော်ကလည်း အလှူအတန်း ၀ါသနာပါပါတယ်။
တစ်နေ့တော့ ဣဿရမဟာတိဿရဲ့ အိမ်မှာ လယ်ထွန်ခြင်း ၊ ပျိုးကျဲခြင်း မင်္ဂလာကို ပြုပါတယ်။
ယောကျာ်းဖြစ်သူက လယ်ကွင်းထဲမှာ ဦးဆောင်ပြီး ဆောင်ရွက်နေသလို ဇနီးလုပ်သူကလည်း လယ်ထွန်ပျိုးကျဲသူတွေ စားဖို့ သောက်ဖို့ အိမ်မှာ ချက်ပြုတ်နေပါတယ်။
ဣဿရမဟာတိဿကို အမြဲတမ်းမနာလိုဝန်တိုစိတ်ဖြစ်နေတဲ့ လူသတစ်ယောက်ကလည်း မြို့ထဲမှာ ရှိနေပြန်ပါတယ်။ ၀န်တိုသူက ၀န်တိုလို့သာ ၀န်တိုနေတာ ၊ ဣဿရမဟာတိဿဆီက ငွေချေးထားတာတွေ ပြန်တောင် မဆပ်ရသေးပါ့ဘူး။
မင်္ဂလာအခမ်းအနား ကျင်းပနေတယ်ကြားတော့ သူ့စိတ်ထဲမှာ ပိုပြီး မနာလိုဝန်တိုဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒုက္ခပေးချင်စိတ် ပေါက်သွားပါတယ်။ အဲဒီ အမျိုးသားက ” ဒါလောက်မှ ဖြစ်နေတာ တွေ့ကြသေးတာပေါ့၊ ပညာပေးလိုက်ဦးမှပဲ ” ဆိုပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းကို ထွက်ခဲ့ပါတယ်။
ကျောင်းတိုက်ထဲရောက်တော့ ဆရာတော်နဲ့ အခန့်သင့်တွေ့ရပါတယ်။ ဆရာတော်ကို ဦးချပြီးတော့
“ ဆရာတော်ဘုရား မနက်ဖြန် သံဃာငါးရာ ဣဿရမဟာတိဿ အိမ်ကို ဆွမ်းစားကြွတော်မူပါ ဘုရား “ လို့ လျှောက်လိုက်ပါတယ်။
ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကလည်း ” အေး…. ကောင်းပြီ ပင့်လာတဲ့ ဆွမ်းစားကို လက်ခံထားလိုက်ပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့ရောက်တော့ ဣဿရမဟာတိဿက လယ်ကွင်းထဲကို စီမံကွပ်ကဲဖို့ သွားပြီး ဇနီးဖြစ်သူကတော့ အလုပ်သမားတွေ စားဖို့ သောက်ဖို့ စီမံရမှာမို့ အိမ်မှာကျန်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ အိမ်ရှေ့ကို သံဃာငါးရာကြွလာပါတော့တယ်။ ပင့်ဖိတ်မထားပဲနဲ့ သံဃာတော်တွေ ကြွလာတာ မြင်လိုက်ရတော့ ပထမတော့ သူဌေးကတော်က အံ့သြသွားပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ချက်ချင်းပဲ သံဃာတော်တွေကို အိမ်ထဲကို ပင့်လိုက်ပါတယ်။
လက်ထဲက သပိတ်တွေကိုလည်း ကိုယ်စီ လှမ်းယူလိုက်ကြပါတယ်။ ကြွလာတဲ့ ခေါင်းဆောင် အရှင်တိဿဒတ္တမထေရ်က အိမ်မှာ သံဃာတော်တွေ ထိုင်ဖို့ အရံသင့်ခင်းထားတာမတွေ့ရတော့ သံသယဖြစ်ပုံရတယ်။ ဒါကြောင့် ဒကာမလုပ်သူကို မေးကြည့်ပါတယ်။
” ဒကာက … ဒီနေ့ သင်တို့ အိမ်မှာ အုတ်အုတ်ကျက်ကျက်နဲ့ တခြားမှာ ကြောင့်ကြစိုက်စရာများရှိနေသလား”
” မှန်ပါဘုရား တပည့်တော် တို့ အိမ်မှာ လယ်ထွန်မင်္ဂလာ ပြုလုပ်နေပါတယ်ဘုရား၊ ဒါပေမယ့် ဆရာတော်ဘုရား မပူပါနဲ့ ဘုရား၊ လယ်ထွန်မှုကိစ္စကို ဒကာ ယောက်ျားက ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဘုရား၊ ဆွမ်းကပ်ဖို့ ကိစ္စက တပည့်တော်မတာဝန်ပါဘုရား”
ဒကာမဖြစ်သူက ဆရာတော်ကို လျှောက်ပြီးဆွမ်းကိစ္စကို အမြန်စီမံရပါတော့တယ်။ စီမံဆဲမှာပဲ ဒကာလုပ်သူက လယ်ထဲက ပြန်ရောက်လာပါတယ်။ လွဲချော်မှုတွေ ဖြစ်နေတာ ဆိုတော့ ဆရာတော်ကပဲ ဒကာကို အရင်ဦးစွာ မိန့်ပြပါတယ်။
” ဒကာရယ် သင်တို့ အိမ်မှာ လယ်ထွန်မင်္ဂလာလုပ်နေကြတာ ငါတို့ သိခဲ့ရင် မကြွပါဘူး၊ ဒကာသူငယ်တစ်ယောက်က လာပင့်လို့ ကြွရတာပါ”
” ဆရာတော်ဘုရား အဲဒီအတွက် ဘာမှ မပူပါနဲ့ဘုရား၊ ဆရာတော်ဘုရားကို လာလျှောက်တဲ့ ဒကာဟာ ဘုရားတပည့်တော်ဆီက ငွေချေးထားတဲ့သူပါဘုရား၊ တကယ်တော့ ၀န်တိုစိတ်နဲ့ တပည့်တော်ရဲ့ လယ်ထွန်မင်္ဂလာကို အန္တရာယ်ဖြစ်အောင် လုပ်တာပါဘုရား၊ ဒါပေမယ့် သူဖိတ်ပေးလို့ ဆရာတော်ဘုရားတို့ကို ဆွမ်းကပ်ခွင့်ရတာပါဘုရား၊တပည့်တော်တို့ အ တွက် သူဟာ ကျေးဇူးကြီးလှပါတယ်ဘုရား၊ ဒီနေ့ကစပြီး သူ့ကို မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်ဘုရား”
ဒကာဖြစ်သူက ဆရာတော်ကို လျှောက်ပြီး ဆွမ်းကပ်ပါတယ်။ ဆွမ်းစားပြီးလို့ ကျောင်းပြန်အကြွမှာလည်း သင်္ကန်းတွေကိုပါ ပေးလှူလိုက်ပါတယ်။
နောက်ထူးခြားးတဲ့ အပြုအမူ တစ်ခုကတော့ ဆရာတော်တွေကို သွားပင့်တဲ့ ရန်ဘက် ၀န်တိုနေတဲ့သူကို ကြွေးအားလုံးကို လျှော်ပစ်လိုက်တော့တာပါပဲ။
ပြောလက်စနဲ့ သီဠ် ၀တ္ထုလေး တစ်ပုဒ်ကိုလည်း ထပ်ပြောလိုက်ပါရစေဦး၊ ရသ၀ါဟိနီကျမ်းကပါ။
တစ်ခါတုန်းက ဥတ္တရာ ပထတိုင်းသားတစ်ယောက်ဟာ ခရီးတစ်ခုထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ခရီးသွားနေတုန်းမှာ နေကသိပ်ပူတော့ ရေကလည်း ဆာလာပါတယ်။ ဒါကြောင့်နီးရာသစ်ပင်ရိပ်အေက်ကို ၀င်နားလိုက်ပါတယ်။ သစ်ပင်အောက်မှာ သူ့လိုပဲ သာဝတ္တိပြည် သား လူစိမ်းတစ်ယောက်ကလည်း ကွမ်းဝါးရင်းနေပူခိုနေပါတယ်။ ဒီတော့ ဥတ္တရာပထတိုင်းသားက ကြိုရောက်နေတဲ့လူစိမ်းကို ရေတောင်းလိုက်ပါတယ်။
” မိတ်ဆွေရယ် ရေလေးဘာလေး မပါဘူးလား၊ ပါရင် နည်းနည်းလောက်ပေးစမ်းပါ၊ ရေသိပ်ဆာနေလို့ပါ”
” မပါဘူး ”
” ဒါဖြစ်ရင်လည်း မိတ်ဆွေရယ်၊ ရေဆာလွန်းလို့ ကွမ်းလေးတစ်ယာ လောက်ပေးပါ”
”်အိုး … ဒီအတိုင်းတော့ ဘယ်ရမလဲ၊ လေးအသပြာပေးရမယ်”
” ရပါတယ်၊ လေးအသပြာပေးပါမယ်”
ပြောပြီး လေးအသပြာကို ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်၊ ဒီတော့ ဥတ္တရာပထတိုင်းသားက ရေဆာပြေအဖြစ် ကွမ်းကို ၀ါးပါတော့တယ်၊
တကယ်တော့ ကွမ်းတစ်ယာဟာ လေးအသပြာ မတန်ပါဘူး၊ လိုနေမှန်းသိလို့ ပုံမှန်ဈေးထက် အဆများစွာ တင်ရောင်းလိုက်တာပါ၊
အမောပြေတော့ ကိုယ့်ခရီကိုယ် ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နှစ်ကာလတွေ ကြာသွားရောပဲဆိုပါတော့.၊
တစ်နေ့သောအခါမှာတော့ ပင်လယ်ပြင်မှာ ခရီးထွက်ရင်း သူတို့နှစ်ဦးဟာ သဘောင်္တစ်စီးမှာ ပြန်ဆုံကြပြန်ပါတယ်။
တစ်နေရာအရောက်မှာတော့ စီးလာတဲ့သဘောင်္က မှောက်သွားပါလေရော။ခရီးသည်တွေဟာ ပင်လယ်ထဲမှာ ယက်ကန်ယက်ကန်နဲ့ ကူးနေကြပါတယ်။ဥတ္တရာပထတိုင်းသားကတော့ ကံကောင်းစွာ ပျဉ်ချပ်တစ်ခုကို ရလိုက်ပါတယ်။
ရတာတဲ့ပျဉ်ချပ်နဲ့ကူးရင်း သူနဲ့ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ယက်ကန် ယက်ကန်နဲ့ ရေထဲ နစ်လုနစ်ခင်ဖြစ်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ သေချာကြည့်လိုက်တော့ တစ်ချိန်က သူ့ကို ကွမ်းတစ်ယာကို လေးအသပြာနဲ့ ရောင်းခဲ့တဲ့သူပါ။
” ဒီမိတ်ဆွေဟာ ငါရေငတ်နေတုန်းက ကွမ်းတစ်ယာရောင်းဖုးတယ်။ ကျေးဇူးရှိခဲ့ဖူးတဲ့ မိတ်ဆွေပဲ” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ပျဉ်ချပ်ကို ထိုးပေးလိုက်ပါတော့တယ်။
ဒီသိဟိုဠ် ၀တ္ထုလေး နှစ်ပုဒ်ကို ပြန်ပြန်ဖတ်ဖြစ်တိုင်း ရင်ထဲမှာ အအေးဓာတ်တစ်ခုခုကို ရလိုက်သလို ခံစားရပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အေးမြတဲ့ အအေးဓာတ်က စာဖတ်သူကိုလာကူးဆက်တဲ့သဘောပါ။ သီဟိုဠ်ခေတ်က ပုံရိပ်ကလေးနှစ်ခုက ရာစုများစွာကြာခဲ့ပါပြီ။ ရာစုတွေ ဘယ်လောက်ပဲ ကြာခဲ့ ဖတ်ရသူတိုင်းက ရင်ထဲကို အေးမြနေရတုန်းပါ။
တို့တစ်တွေ ပြန်ဆုံကြတဲ့အခါ အပိုင်း (၁) လို့ပဲ ပေးထားလိုက်ပါတော့မယ်. နောက်ဆက်တွဲ တွေ ရှိပါသေးတယ် စာရိုက်ရတာမအားလို့ နောက်နေ့မှ ပြန်လည် တင်ပေးပါတော့မယ်။
မတ်လ၊ ၂၀၀၆ ။
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 1:59 AM0comments Links to this post
ဒါလေးကတော့ Mp3 တွေကို မေးနဲ့ပို့ကြတဲ့အခါမှာ သီချင်းရဲ့ ဆိုဒ်က 4MB လောက်ဆိုရင်ကို ဒီက ကော်နက်ရှင်တွေနဲ့ဆိုရင် သိပ်အဆင် မပြေတာ များပါတယ်။ ဒါကြောင့် 4MB ရှိတဲ့ သီချင်းကို 1MB လောက်ထိ ချုံ့ပြီး ပို့တော့ အဆင်ပြေနိုင်လောက်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဆော့ဝဲလ် လေးကို အသုံးပြုပြီး ပို့လို့ရအောင် ပြန်လည် မျှဝေလိုက်တာပါ။ ချုံ့နိုင်တဲ့ Bitrate ကတော့ အများဆုံး 256 kbit ကနေ 8kbit အထိချုံ့ နိုင်ပါတယ်။ အသံကတော့ ချုံ့တဲ့ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး အနည်းငယ် တိုးတိုး သွားနိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ကြနော်………။
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 1:44 AM0comments Links to this post
ဒါလေးက တော့ PDF ဖိုင် အဖြစ် ပြောင်းချင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ သူတွေ အတွက် PDF Creator လေးပါ။ Office files တွေ ပုံတွေကနေမှ PDF File Type အဖြစ် လွယ်လွယ်ကူကူ ပြောင်းလို့ ရတဲ့ Software လေးပါ။
အသုံးပြုပုံက တော့ ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကို စက်ထဲတော့ အင်စတော အရင်လုပ်ထားလိုက်ပါ။ ပြီးတော့ ကိုယ်ပြောင်းမယ့် ဖိုင်ကို ဖွင့် Print ထုတ်သလို Print ကို နှိပ် တဲ့အခါမှာ အောက်က ပုံလေးအတိုင်း Printer Name ရွေးတဲ့နေရာမှာ နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ အောက်နားမှာ PDF Creator ဆိုတာလေး တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
နှိပ်လိုက်ပါ။ အဲဒါဆိုရင် ဘယ်နားသိမ်းမလဲ ဆိုတဲ့ Box ကလေး ကျလာရင် သိမ်းမယ့်နေရာရွေးပြီး File Name လေးလဲ ပေးပြီးဆိုရင် Save လို့ ဆက်နှိပ်လလိုက်တဲ့အခါမှာ.. သင့်ရဲ့ PDF File လေးကို သင်သိမ်းထားတဲ့ နေရာမှာ တွေ့မြင်ကြရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ Software လေးကိုတော့အောက် မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ကြနော်..။
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 1:36 AM0comments Links to this post
ဒါလေးက တော့ ကလုံးရိုက်ဖို့ Backup လုပ်ဖို့ နဲ့ Image ရိုက်ဖို့ အပြင် အခြား လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အများကြီးပါပါတယ်။ စမ်းကြည့်လိုက်ကြပါ။ ကလုံး ရိုက်ပုံ အကြောင်းကိုတော့ အရင်တခါ ပုံလေးတွေနဲ့ တဆင့်ချင်း တင်ပြပေးထားပါတယ်။ ပုံကတော့ Version 6.0 ဖြစ်နေပေမယ့် ကျွန်တော် Upload တင်ထားတာကတော့ Version 5.0 လေးပါ။ Keygen ရောပါပြီးသားလေးမို့ပါ။ သုံးရတာ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဆိုဒ်တော့ နည်းနည်း ကြီးတယ် ။ အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ကြနော်………။
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 1:22 AM0comments Links to this post
Windows7ကို Laptop တွေမှာ တင်တဲ့အခါ ကြရင် ခွေထဲမှာပါတဲ့Loaders တွေ နဲ့ က အဆင်မပြေပါဘူးခင်ဗျာ.။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ Windows7ကြီးကို တစ်လပဲ သုံးလို့ ရတော့မှာပါ။ တလ ပြည့်သွားရင် နောက်ထပ် ပြန်တင်ရမယ့်ပုံပါပဲ။ အဲဒါကြောင့် Windows7ကို Laptop မှာ အပြည့်အ၀ သုံး လို့ ရဖို့ အတွက် အင်တာနက်ထဲ မှာ မွှေလို့ ရထားတဲ့ Windows7Loaders လေးတွေ ကို ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။ အင်တာနက်ထဲ မွှေတယ်ဆိုတာ ထက် အထူးသဖြင့် MZ ထဲမှာ ပဲ အများဆုံး မွှေလိုက်လို့ ရတာတွေပါ။ ကျွန်တော်တော့ ဒီ Loader လေးတွေ နဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျ… အဆင်မပြေတာ ရှိရင်တော့ ပြန်ပြောပေးကြပါ။
1.Download ( Version 1.7.3 )
2.Download ( Version 2.3.3 for Vista &7)
3.Download ( Version 1.7.7 )
4.Download ( Version 3.117 for Extreme Edition & others )
5.Download ( Release 24.10.2009 )
6 Download ( 7600 RTM Version 7.0 )
လာသော ယောက်ျားကိုမ်ိန်းမက မေးလိုက်သည်။မိန်းမ။ ။မောင်ရေ အခြေအနေဘယ်လိုလဲ။
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 1:18 AM0comments Links to this post
အလုပ်အကိုင်မရှိသေးတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ အလုပ်လိုချင်တဲ့ အတွက် မိုက်ကရိုဆောဖ့် ကုမ္ပဏီမှာ ရုံးအကူ တစ်နေရာအတွက် အလုပ် သွားလျှောက် ပါတယ် …. သက်ဆိုင်ရာ ခန့်ခွဲမှု မန်နေဂျာက သူ့ကို အင်တာဗျူး လုပ်ပါတယ်.. ပြီးတော့ ကြမ်းပြင်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခိုင်းပြီး သူ့ကို စမ်းသပ် စစ်ဆေး ပါတယ်…
စမ်းသပ်လို့ သူ့လုပ်ရည် ကိုင်ရည်ကို ကျေနပ်သွားတဲ့အခါ မန်နေဂျာက ကောင်လေးကို “ကဲ.. မင်းကို အလုပ်ခန့်လိုက်ပါပြီ… မင်းရဲ့ အီးမေလ်း လိပ်စာ ထားခဲ့… မင်း အီးမေလ်းထဲကို အလုပ်ခန့်လွှာပို့လိုက်မယ်.. မင်းက အဲဒီထဲမှာ လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေဖြည့်ရမယ်.. ပြီးရင် မင်း အလုပ် စ၀င်နိုင်မဲ့ရက်ကို ဖြည့်ပြီး တို့ဆီကို ပြန်ပို့လိုက် ” လို့ ပြောပါတယ်..
စဉ်းစားလို့ရသွားပြီဖြစ်တဲ့သူ… သွက်လက်တဲ့ ခြေလှမ်းတွေနဲ့ အတူ စူပါ မားကက်ကို သွားပါတယ်…. အဲဒီမှာ ခရမ်းချဉ်သီး ၁၀ ကီလိုဂရမ်ပါတဲ့ တစ်သေတ္တာကို ၀ယ်လိုက် ပါတယ်.. ပြီးတော့ တစ်အိမ်တက်ဆင်း အိမ်တွေမှာ လိုက်လံရောင်းချပါတယ်.. မယုံနိုင်စရာ ၂နာရီမပြည့်ခင်လေးမှာ သူ့ငွေက ၂ဆ ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ.. ၃ကြိမ်မြောက် ၀ယ်ယူပြီး ပြန်ရောင်းချလို့ အကုန်မှာ ဒေါ်လာ ၆၀နဲ့ အတူ အိမ်ကို ပြန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်..
၅နှစ်အကြာမှာ… အဲဒီကောင်လေးဟာ အမေရိကားရဲ့ အစားအသောက် လက်လီရောင်းချတဲ့ အကြီးဆုံး လုပ်ငန်းရှင်ကြီး တစ်ဦး ဖြစ်လာ ပါတော့တယ်… ချမ်းသာလာတဲ့ ကောင်လေးဟာ သူ့မိသားစု နောင်ရေးအတွက် အသက် အာမခံထားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်..
“ကျုပ်သာ ကွန်ပျူတာ တတ်မယ်.. အီမေလ်း လိပ်စာသာ ရှိခဲ့မယ် ဆိုရင် ခုချိန်မှာ မိုက်ကရိုဆောဖ့် ကုမ္ပဏီမှာ ရုံးအကူဘ၀နဲ့ ရှိနေပါလိမ့်မယ်” တဲ့
ဒီ story လေးက ပေးချင်တဲ့ သင်ခန်းစာလေးကတော့ လူတွေ အရူးအမူး ဖြစ်နေကြတဲ့ အင်တာနက်တို့ ကွန်ပျူတာတို့ ဆိုတာဟာ ဘ၀ရဲ့ အခက်အခဲ မှန်သမျှက်ို ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ အရာတွေ မဟုတ်ပါဘူး… အထူးသဖြင့် ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည်က လူငယ်လေးတွေမှာ လူတိုင်းလူတိုင်း ကွန်ပျူတာ အင်တာနက် ဆိုတာ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်း နည်းပါးလွန်း နေပါသေးတယ်.. ဒီလိုလူတွေ အားမငယ်ကြဖို့ ဒီပို့စ်လေးကို တွန်းအားလေးတစ်ခု အနေနဲ့ ဘာသာ ပြန်ဖြစ်ပါတယ် အင်တာနက်၊ ကွန်ပျူတာ တို့နဲ့ အလှမ်းဝေးနေသေးရင် ကိုယ်နဲ့ နီးစပ်ရာ၊ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ အလုပ်တွေမှာ ကြိုးကြိုးစားစား လုပ်ကိုင်မယ်ဆိုရင် ချမ်းသာနိုင်တဲ့ အခွင့် အလမ်းတွေ ရှိနေပါသေးတယ်.. အခွင့်အလမ်းကိုတော့ မြင်တတ် တွက်တတ် ရပါမယ်.. ကြီးပွားချင်တဲ့ စိတ်ရှိဖို့ရယ်.. ကြိုးစားချင်တဲ့ စိတ်ရှိဖို့ရယ် အဓိက ကျပါတယ်…. ပြင်းပြတဲ့ စိတ်ဆန္ဒနဲ့ ကြိုးစား ကြည့်ကြပါလို့ တိုက်တွန်း လိုက်ပါရစေရှင်….
မူရင်း ကနေ http://www.funzug.com/index.php/stories/the-tomato-story.html နှစ်သစ် လက်ဆောင်အဖြစ် အင်အား တစ်ခုခု ရစေဖို့ ဒီပိုစ့်လေးကို ဘာသာပြန် ဝေမျှလိုက်ပါတယ်..
fwdmail ….မှ ပြန်လည်မျှဝေ ခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 1:16 AM0comments Links to this post
ဒီတစ်ခါ မေးထဲရောက်လာတဲ့ စာလေးတွေကတော့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀မှာ. ရဲစွမ်းသတ္တိ နဲ့ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေ ဖြစ်ပေါ်လာစေတဲ့ အကြောင်းအကြောင်းအရာ လေးတွေကို စာဖတ်သူတွေ ဆီကို စိတ်ဓာတ်ခွန်အား တွေ တက်ကြွ လာစေရန် ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာလေးကတော့ ဘယ်စာအုပ်မှာ ပါလဲ ဆိုတောတော့ မသိပါဘူး။ မေးထဲရောက်လာတာလေးပါ။ အောက်မှာတော့ အစိမ်းရောင်လွင်ပြင် လို့တော့ ပါလာပါတယ်……….
ကျွန်တော်ဟာ တာဝေး အပြေးသမား တစ်ယောက်ပါ… ကြုံတွေ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက် ကလေးကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပြေးလမ်း တစ်ခုပေါ်က အမှတ်တရ လေးပါ ကျွန်တော် မီတာ ၃၂၀၀ အပြေးပြိုင်ပွဲ ၀င်ဖို့အတွက် တစ်ရာသီလုံး လေ့ကျင့်မှုတွေ ကျွန်တော် အကြိမ်ကြိမ် လုပ်နေခဲ့ပေမဲ့ အရင်တုန်းကတည်းက ရထားတဲ့ ခြေထောက် ဒဏ်ရာက ခုချိန်ထိ မသက်သာသေးပါဘူး.. ဒါကြောင့်လဲ ကျွန်တော်ဟာ ဒီပြိုင်ပွဲကို ၀င်သင့် မ၀င်သင့် အတန်တန် စဉ်းစားခဲ့တယ်.. ဘယ်လိုပင် ဖြစ်စေကာမူ ပြိုင်ပွဲနေ့ရောက်တော့ ကျွန်တော် ၀င်ပြိုင် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်…
သေနတ်သံက ကျယ်လောင်စွာ ထွက်လာပြီး ကျွန်တော်တို့လဲ တာလွှတ်တဲ့ နေရာကနေ ပြေးထွက်လာကြပါတော့တယ်.. မိန်းခလေးတစ်ယောက်က ကျွန်တော့် ရှေ့ကနေ ပြေးနေတာကို ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်… ပထမ အပြေးပတ်လမ်း သုံးပတ် ပြည့်တဲ့အချိန်မှာ ခြေထောက်က နာကျင်လွန်းလို့ ထော့နင်း ထော့နင်း ဖြစ်နေပါပြီ.. ကောင်မလေးရဲ့ နောက်မှာ ကျွန်တ်ာဟာ တစ်ဖြေးဖြေး ဝေးပြီး ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီ ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သဘောပေါက်မိတယ်.. ဒီအခါမှာတော့ အရှက်တကွဲ ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ စိတ်အနှောက်အယှက်က ပိုပိုပြီး ဖိစီးလာပါတယ်.. ပထမနေရာက ဦးဆောင်ပြေးနေသူ မိန်းခလေးက ကျွန်တော့်ထက် ပြေးလမ်း ၂ပတ် စောနေခဲ့ ပါတယ်..
မိန်းခလေးက ပန်းတိုင်ကို ၀င်သွားတဲ့ အချိန်မှာ ကြည့်ရှုနေတဲ့ ပရိသတ်တွေဆီက ဝေး ဆိုတဲ့ အလွန်ကျယ်လောင်လှတဲ့ လက်ခုပ်သြဘာသံနဲ့ အော်ဟစ် အားပေးတဲ့ အသံကြီးကို ကျွန်တော်ကြားလိုက်ရပါတယ်.. ကျွန်တော့်တစ်သက်မှာ ကြားဖူးသမျှ အားပေးသံတွေထဲမှာ အကျယ်လောင်ဆုံး အသံတွေဘဲ ဖြစ်ပါတယ်.. အဲဒီချိန်မှာ ကျွန်တော် စဉ်းစားလိုက်မိတာက ဒီပြိုင်ပွဲကနေ ကျွန်တော်ထွက်သင့်ပြီဆိုတာပါဘဲ.. ဒီပွဲကို ကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေက ခြေထောက် ထော့နင်း ထော့နင်းနဲ့ ပြေးနေတဲ့ ကျွန်တော့်လို လူတစ်ယောက်ရဲ့ ပန်းတိုင် ၀င်ချိန်ထိအောင် စောင့်ကြည့်ချင်ကြလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် မထင်ပါဘူး… ဒါပေမဲ့လည်း ကျွန်တော့် အတွင်းစိတ်ကတော့ ဆက်ပြေးဖို့ကိုဘဲ တိုက်တွန်းနေခဲ့ပါတယ်..
ပန်းဝင်ဖို့ ပြေးလမ်း ၂ပတ်လောက် ကျန်သေးတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော့်ခြေထောက်တွေက ဆိုးဆိုးဝါးဝါး နာကျင် ကိုက်ခဲလို့နေပါပြီ.. နာကျင်ခြင်းတွေနဲ့ ခက်ခက်ခဲခဲ ပင်ပန်း ဆင်းရဲခြင်း ကြီးစွာနဲ့ ဆက်ပြေးနေရင်းနဲ့ နောက်နှစ်တွေမှာ ဒီအပြေးပြိုင်ပွဲကို ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း မပြုတော့ဖို့ ကျွန်တော် ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက် မိပါတယ်.. တကယ်လို့ ကျွန်တော့်ခြေထောက် ပြန်ကောင်းလာခဲ့ရင်လည်း ကျွန်တော် မပြိုင် ချင်တော့ပါဘူး.. ကျွန်တော့်ထက် ပြေးလမ်း ၂ပတ်စောပြီး ပန်းဝင် သွားတဲ့ မိန်းခလေးတစ်ယောက်ကိုတောင် ကျွန်တော်နိုင်အောင် မပြေးနိုင်ခဲ့တာ ရှက်ဖို့ တော်တော်ကောင်းပါတယ်.. မိန်းခလေးတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို အနိုင် ရသွားတဲ့အဖြစ်.. တွေးကြည့်ရင် ကျွန်တော် ဘယ်လောက်များ အသုံးမကျလိုက်တဲ့ လူလဲဗျာ…..
ကျွန်တော် ပန်းဝင်မျဉ်းကြောင်းကို ကျော်ဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ခုနက ပထမဆုံးပန်းဝင်သွားတဲ့ မိန်းခလေးကို အားပေးကြသလိုမျိုး ကျယ်လောင်လှတဲ့ အားပေး အော်ဟစ်သံ၊ လက်ခုပ်တီးသံ တွေကို ကြားလိုက်ရပါတယ်.. ဘာတွေ ဒီလောက် အော်ဟစ်နေကြပါလိမ့်… ကျွန်တော် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးလိုက်မိတယ်… ဟိုကြည့် ဒီကြည့်နဲ့ သေချာအောင် ကျွန်တော် လိုက်ရှာမိတော့ နောက်ပြိုင်ပွဲ တစ်ခုအတွက် ပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့လူတွေက နေရာယူနေကြတာ တွေ့ရပါတယ်…. ဒီတော့ သူတို့ကို အားပေး နေကြတာဘဲလို့ တျွန်တော် သဘောပေါက်မိပြီး ရေချိုးခန်းဘက်ကို လျှောက်လာခဲ့ပါတယ်.. အဲဒီချိန်မှာ ပထမဆုံး ပန်းဝင်သွားတဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ မမျှော်လင့်ဘဲ ၀င်တိုး မိပါတယ်..
“အိုး….. ရှင်က အရမ်း တော်တာဘဲနော်… ဒီလို ရဲရင့်တဲ့ ခွန်အား ၊သတ္တိတွေ ရှင် ဘယ်ကများရပါလိမ့်…”
“ ရဲရင့်တယ်? ”
သူ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ လူမှားနေပုံရတယ်.. ကျွန်တော်က ပြိုင်ပွဲမှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့လူလေ..
“ကျွန်မသာ ရှင့်နေရာမှာဆိုခဲ့ရင် ဒီ ၂မိုင်လောက် ရှိတဲ့ ပြေးပွဲကို ဘယ်လိုမှ ၀င်ပြိုင်နိုင်မယ် မထင်ဘူး.. ပထမ ပြေးလမ်းမှာတင် ထွက်ဖြစ်မှာ သေချာပါရဲ့… ရှင့်ခြေထောက်က ဘာများဖြစ်လို့လဲ … ဒီလောက် နာကျင်နေတဲ့ကြားက ရှင် ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ ပန်းတိုင်ကို ရောက်အောင် ပြေးနိုင်တယ်နော်… ကျွန်မတို့တွေ ရှင့်ကို အော်ဟစ် အားပေးနေကြတာ ရှင်ကြားတယ်မဟုတ်လား… ပွဲကြည့်တဲ့သူတွေ အားလုံးကလဲ နာကျင်နေ တာတောင် အရှုံမပေးဘဲ ပြီးအောင် ပြိုင်ပွဲဝင်သွားတဲ့ ရှင့်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ချီးကျုး လေးစားပြီး အားလုံးက လက်ခုပ်တီး၊ အော်ဟစ်ပြီး အားပေး နေခဲ့ကြတာလေ…”
အိုး… အံ့သြစရာပါလား..ကျွန်တော် ယုံတောင် မယုံနိုင်အောင်ပါဘဲ.. တစ်စိမ်းပြင်ပြင် မိန်းခလေးတစ်ယောက်နဲ့ ပွဲကြည့်ပရိတ်သတ်တွေက ကျွန်တော့်ကို အော်ဟစ် အားပေးနေခဲ့တာတဲ့.. အဲလိုအားပေးခြင်းဟာ ဒီပြိုင်ပွဲမှာ အနိုင်ရ ဗိုလ်စွဲစေလိုသောကြာင့်မဟုတ်ဘဲ.. ကျွန်တော့်အား ပြိုင်ပွဲကို ဆက်လက်ပြီး ပြေးစေချင် သောကြောင့်၊ လက့်လျှော့ အရှုံးမပေး စေလိုသောကြောင့် အားပေး နေကြခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော် သိရပါပြီ.. ကျွန်တော့်မျှော်လင့်ချက်တွေ၊ အိပ်မက်တွေ ပြန်လည် တောက်ပလို့ လာခဲ့ပါပြီ… ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်ပါတယ်… နောက်နှစ်မှာ အပြေးပြိုင်ပွဲကို ကျွန်တော် ပြန်ဝင်ဖြစ်အောင် ၀င်ပါတော့မယ်..
တော်ပါသေးရဲ့… ကျွန်တော်ရဲ့ ချွတ်ခြုံကျသွားခဲ့တဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့၊ ပျောက်ရှ သွားတော့မဲ့ အိပ်မက်ကို ပြန်လည် အသက်သွင်းပေးလိုက်သူက ထို ပထမ ရသွား ခဲ့သော မိန်းခလေးသာ ဖြစ်ပါတယ်.. အဲဒီနေ့က ကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာလေး၂ခုမှာ
ပထမတစ်ခုက တစ်စုံတစ်ဦးဆီက ရလိုက်တဲ့ အကြင်နာတရားနဲ့ အားပေး ချီးကျူးစကားတွေဟာ မမျှော်လင့်ဘဲ လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘ၀ကို ကောင်းကောင်းကြီး ပြောင်းလဲ သွားစေနိုင်တယ် ဆိုတာရယ်.
ဒုတိယအချက်က ရဲစွမ်းသတ္တိ နဲ့ စိတ်ဓာတ်ခွန်အား ဆိုတာ ဆုတံဆိပ်၊ အောင်မြင်မှု ဆိုတာတွေနဲ့ တိုင်းတာလို့မရဘဲ ပြိုင်ပွဲကို ဘယ်လို အခက်အခဲဘဲ ကြုံတွေ့လာပါစေ.. ပြီးဆုံးအောင် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနဲ့သာ တိုင်းတာသင့်ကြောင်း နားလည်ခွင့် ရလိုက်ပါတယ်..
ကြီးကျယ်သော ခွန်အားရှိသူ၊ ဘ၀ကိုအောင်နိုင်သူများ ဆိုတာ ပြိုင်ပွဲမှာ အနိုင်ရသူတွေကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ဘဲ ဘ၀မှာ အရှုံးနဲ့ ကြုံတွေ့ရသော်လည်း အလွယ်တကူ အားမလျှော့ဘဲ၊ မလျှော့သောဇွဲ၊လုံ့လတို့နဲ့ ရည်ရွယ်ရာ ပန်းတိုင်ကို ရောက်အောင် သွားနိုင်တဲ့ သူတွေကိုသာ ခေါ်ဆိုပါတယ်… အခုတော့ ကျွန်တော့်မှာ အိမ်မက်လေး တစ်ခု ရှိလာပါပြီ.. အဲဒီအိပ်မက်လေးက တစ်ခြားမဟုတ်ပါဘူး… အကြီးတန်းအပြေးသမား ဘ၀နဲ့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့် ခွန်အားသစ်တွေနဲ့ အပြေး ပြိုင်ပွဲကို ပြန်ဝင်ပြီး အနိုင်ရအောင် ယှဉ်ပြိုင်ပါမယ်.. အဲဒီချိန်ကျရင် ကျွန်တော်ရှုံးနိမ့်ခဲ့စဉ်က ရခဲ့ဖူးတဲ့ အားပေးချီးကျူးသံ လက်ခုပ်သံတွေကို ပြန်လည်ရရှိ နိုင်လိမ့်လို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်မိပါတယ်… ဒီအိမ်မက်လေးကို ပြန်လည် မွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့ ပြေးလမ်းပေါ်မှာ ကျွန်တော့်ထက်အရင် ပန်းဝင်သွားသူ မိန်းခလေးကို ကျေးဇူးတင် သတိရနေမိမှာပါခင်ဗျာ…………
ကျွန်နုပ်တို့တွေရဲ့ ဘ၀ ဆိုတဲ့ တာဝေး ပြေးလမ်းတစ်လျှောက်မှာ အခက်အခဲဆိုတဲ့ နာကျင်မှုတွေ၊ ရှုံးနိမ့်မှုတွေနဲ့ လူတိုင်း ကြုံတွေ့ကြမှာပါ.. အဲဒီလို အခက်အခဲတွေ၊ ရှုံးနိမ့်မှုတွေနဲ့ ကြုံတဲ့အခါမှာ ကျွန်နုပ်တို့ဟာ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ လက်လျှော့ အရှုံးပေးကြမလား စဉ်းစားစရာပါ…. ကြီးကျယ် မြင့်မြတ်တဲ့ အောင်နိုင်သူ ၊ မဟာ လူသားဆိုတာ ဘ၀မှာ စီးပွားဥစ္စာ ကြီးပွား ချမ်းသာနေပြီး၊ အောင်မြင်ထင်ရှား ကျော်ကြားနေတဲ့သူတွေကို ခေါ်တာမဟုတ်ဘဲ အခက်အခဲများ၊ ရှုံးနိမ့်မှုများနဲ့ ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာ လက်လျှော့အရှုံးမပေးဘဲ ပြန်လည်ကြိုးစား ရုန်းကန်ပြီး ဘ၀ပြေးလမ်းကို ခွန်အားသစ်များနဲ့ ဆက်လက် ယှဉ်ပြိုင်သူများကိုသာ ခေါ်ပါတယ်ဆိုတာ ဒီပြေးလမ်းပေါ်က ရှိလိုက်တဲ့ သင်ခန်းစာလေးပါ… ကျွန်နုပ်တို့လဲ ဘယ်လောက်ကြီးမားတဲ့ ရှုံးနိမ့်မှုနဲ့ ကြုံတွေ့ရပါစေ ဘ၀ ပြေးလမ်းပေါ်က မစွန့်ခွာဘဲ ရှိသမျှ ခွန်အားတို့နဲ့ ရင်ဆိုင် အနိုင်ယူ ကြပါစို့လား။….
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 1:13 AM0comments Links to this post
Power DVD9သုံး ချင်သူများအတွက် အဆင်ပြေအောင် ဒီနေရာလေးက နေ စုစီးပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ.. Power DVD9ရဲ့Software လေးကိုတော့ Filehippo ဆိုဒ်ကနေမှ လင့် လေး ပေးလိုက်မယ်နော်..
ဒီကနေ ဒေါင်း ယူလိုက်ကြပေ့ါဗျာ။
PowerDVD9Software လေး ရပြီဆိုရင်တော့ စက်ထဲမှာ အင်စတော လုပ်ပြီး သုံးရင် ဒီအတိုင်း သုံးလို့ ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး ခင်ဗျ..
သူ့ ရဲ့ Activation Key လေး တော့ ရမ်းပေးလိုက်မှ သုံးလို့ ရမှာပါ။
အဲဒီအတွက် Activater လေး ကို4Shared က နေ တင်ပေးလိုက်တယ်နော်..
အားလုံး အဆင်ပြေပြေ နဲ့ ကိုးရီးယား ကား များများ ကြည်နိုင်ကြပါစေ……….နော်.
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 1:08 AM0comments Links to this post
Drive Clone Pro ဆိုတော့ ကလုံး ရိုက်တဲ့ Software လေး နဲ့ အသုံးပြုပုံလေး ပါ။
Drive Clone Pro ဆိုတာက တော့ Hard Disk ကို ကလုံး ရိုက်တဲ့ ဆော့ဝဲလ် လေး တစ်ခုပါ။ ကလုံးရိုက်တယ် ဆိုတာကတော့. ဘယ်နေရာတွေ မှာ အသုံးများလဲ ဆိုရင် ကွန်ပျူတာ ဆားဗစ်စင်တာတွေနဲ့ အင်တာနက်ဆိုင်တွေ မှာ.နည်းပညာသမား တွေ အသုံးများပါတယ်။ ကွန်ပျူတာ ဆားဗစ်စင်တာ တွေမှာ လည်း စက်အလုံးရေ. အများနဲ့လာဝယ်တဲ့အခါမှာ ၀င်းဒိုးတင်ပေးရပါ. အဲဒီလို ၀င်းဒိုး တင်တဲ့အခါမှာ စက်တစ်လုံးချင်းကို တင်နေမယ်ဆိုရင်. အချိန်တွေ အရမ်းကုန်နေမှာဆိုးတဲ့အတွက် စက်တစ်လုံးထဲကို ၀င်းဒိုးတင်ပြီး လိုအပ်တဲ့ဆော့ဝဲလ်တွေ အကုန်ထည့်ပြီးပြီဆိုတော့ ကျန်တဲ့ Model အမျိုးအစား တူတဲ့ စက်တွေ အတွက် Hard Disk လေး ကိုတပ်ပြီး ကလုံးရိုက်ပြီး ပြန်တပ်ပေးလိုက်ယုံပါပဲ.။ကလုံးရိုက်လို့ ကြာတဲ့ အချိန်ကတော့ 10 မိနစ် နဲ့ 15 မိကြားလောက်ပဲ ကြာပါတယ်။ ၀င်းဒိုးအသစ်တင်တာနဲ့ ဆော့ဝဲလ်တွေ အပြည့်အစုံထည့်မယ်ဆိုရင်. ၂ နာရီ ၀န်းကျင်လောက်ကြာပါတယ်။ အခု လို ကလုံးရိုက်လိုက်တော့ နှစ်နာရီ ၀န်းကျင်လောက်ဆိုရင်. စက်အလုံးရေ 10 လုံး ကျော်ကျော်လောက် ပြီးသွားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ကလုံး ရိုက်ကြတဲ့ နေရာ မှာတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူကြပါဘူး ။ ကလုံး ရိုက်တဲ့ ဆော့ ၀ဲလ် တွေ ကလည်း အများ ကြီး ရှိပါတယ်။ ကိုယ် ကြိုက်တာ ကိုယ်ကျွမ်းကျင်ရာ ကိုယ်သုံးကြပါတယ်။ အဲဒီလို အများကြီးရှိတဲ့ ကြားက ကျွန်တော် အသုံးပြု နေတဲ့ Far Stone က ထုတ်တဲ့ Drive Clone Pro ဆိုတဲ့ ဆော့ဝဲလေးနဲ့ အသုံး ပြုပုံလေး ကို. ကျွန်တော် သိသလောက်လေး ကို ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆော့ဝဲလ် လေး က ကလုံးရိုက်ယုံ သက်သက် မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီဆော့ဝဲလ် လေး ထည့်ထား မယ်ဆိုရင် အဲဒီစက် မှာ ရှိတဲ့ C: Drive ကြီး တစ်ခု လုံး ကို Backup လုပ်ထားလို့ ရပါတယ်။ အဲဒီ Backup ကို D: Drive ဒါမှ မဟုတ် Memory Stick တစ်ခုခု ထဲသို့Backup လုပ်ထားလိုက်ရင် အဲဒီစက် မှာ ၀င်းဒိုး လုံးဝ ပြန်မတက်ပဲ ကျသွားပါစေ ဒီ Drive Clone Pro ဆိုတဲ့ဆော့ ၀ဲလ်လေးက ၀င်း ဒိုးမတက်ခင် သူက အရင် လိုင်းလေ နှစ်လိုင်းပြေး နေပါတယ်.အဲဒီအချိန်မှာ အမိအရ စပေ့ဘားလေး နှိပ်လိုက်ရင် Drive Clone Pro ဆိုတဲ့ မီနီ ၀င်းဒိုးလေး ထဲရောက်သွားပါတယ်။ အဲဒီထဲ ရောက်မှ Restore My Computer ကိုနှိပ်ပြီး စောစောက Backup လုပ်ထားတဲ့ ဖိုင် ကို Restore လုပ်လိုက်ရင်. ကြာတဲ့ အချိန်ဟာ သုံး မိနစ်လောက်ပဲ ကြာပါတယ်.. ပြီးတော့ စက်ကို restart နဲ့ ပြန်တက်လိုက်ရင်.. ကျွန်တော်တို့ အရင် Backup လုပ်ထားတဲ့ အချိန်တုန်းက ၀င်းဒိုးအတိုင်း အသစ် ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။ Backup လုပ်တဲ့ အချိန်တုန်းက ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ Backup ဖိုင်ကို ဗိုင်းရပ် ရန်မှ ကာကွယ်ဖို့ အတွက် Password ခံထားလို့ လည်း ရပါတယ်။ တခြား မော်ဒယ်တူတဲ့ စက်က ဟာ့ဒစ်ကို လည်း ကလုံး မရိုက်ပဲ အဲဒီ Backup ဖိုင်ကို ပဲ Restore ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း သုံးမိနစ်လောက်နဲ့ ပြီးပါတယ်။ အဲဒီ ဆော့ ၀ဲလ်လေးနဲ့ ကလုံး ရိုက်နည်းလေးကို. ကျွန်တော် တဆင့်ချင်းလေး ပြောရေးပြပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျ.. အောက်မှာ စဖတ်လိုက်ကြရအောင်..
ပထမဆုံး ဟာ့ဒစ်ကို အရင် တပ်ထားလိုက်ပါ. ပြီးတော့ ကလုံး ရိုက်မယ့် ဟာ့ဒစ်မှာ အရင်က ၀င်းဒိုးရှိထားခဲ့ရင်. Boot တက်တဲ့ နေရာမှာ အဆင်မပြေဖြစ်မှာ ဆိုးတဲ့အတွက် Drive Clone Pro ဆော့ဝဲလ် လေး တက်လာတာနဲ့ စပေ့ဘားလေး နှိပ်ပြီး အရင် ၀င်လိုက်ပါ. ပြီးတော့ Restart ပြန်ချလိုက်ပါ။ အဲဒါဆိုရင် နောက်တပ်တဲ့ ဟာ့ဒစ်နဲ့ အရင် ၀င်းဒိုးထဲမှာ နှစ်ခု တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆော့ ၀ဲလ်လေး ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
ပြီးတော့ အောက်က ပုံလေး အတိုင်း Clone Drive ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် အောက်က ပုံလေး မှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်း Clone Drive အောက်မှာ ရှိတဲ့ Source Drive နဲ့ Destination Drive ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင်
Next ကိုနှိပ်လိုက်ရင် Destination Drive ရဲ့ Partition ပုံစံ ဟာ Source Drive ရဲ့ Partition ပုံစံ အတိုင်း ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ပြထားတာပါ။
ပြီးရင် Next ကို ဆက်နှိပ်ပါ။
Next ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ. အပေါ်မှာ ရွေးထားခဲ့တာ Source Drive နဲ့ Destination Drive ကို သေချာအောင် ပြန်ပြပေးတဲ့သဘောပါ။ တကယ်လို့ Source နဲ့ Destination မှားနေတယ် ဆိုရင် ပြန်ပြင်လို့ရအောင် သေချာအောင် ပြတဲ့သဘောပါ။ သေချာပြီဆိုရင်တော့
Clone Now ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ အဲဒီလိုနှိပ်လိုက်ရင်…
ထပ်မံပြီးတော့ သတိပေးတဲ့စာကတော့ Destination Drive ထဲမှာ ရှိတဲ့ Partition တွေထဲမှာ ရှိတဲ့ Data တွေ ပေါ်မှာ Overwrite လုပ်ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ သတိပေးစာလေး ပါ။
Continue ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
စပြီးတော့ ကလုံး ရိုက်နေပါပြီ. အဲဒီမှာ Estimate Time Remaining : က ၄ မိနစ် လောက်ပဲ ကြာပါတယ်။
အောက်က အခြေအနေက တော့ ကလုံး ရိုက် ချိန် ၄ မိနစ်နဲ့ တင် ပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်း ပြတဲ့ Box လေးပါ။ ကလုံး ရိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာ စက်ကို Shut Down ချပြီးတော့ အဲဒီ ဟာ့ဒစ် ကို တခြား စက်မှာ သွားတက်လိုက်ပါတော့ ၀င်းဒိုး အသစ်တစ်လုံး ကို ဟာ့ဒစ် ဖြုတ်ချိန် တက်ချိန်ရောမှ ၁၀ မိနစ်လောက် နဲ့ တင် ပြီးဆုံး သွားပါတယ်။
ကျွန်တော်သုံးတာကတော့ Drive Clone Pro Version 5.0 ပါ ကီးချန် ရော ရှိပါတယ်။ ဆိုဒ်ကတော့ 87.5 MB ရှိပါတယ်။ ဒီဆော့ဝဲလ်လေး ကိုတော့ တင်ပေးချင်ပါတယ် ကျွန်တော် တင်နေတာ သုံးခါ ရှိပါပြီ။ ကောနက်ရှင် အခြေအနေအရ အဆင်မပြေလို့ အခုတော့ တော့ မတင်ပေးနိုင်တာ ကို ခွင်လွှတ်ကြပါလို့. နောက်များမှ အဆင်ပြေရင် ပြန်တင်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ.။
ပြီးတော့ ဒီဆော့ဝဲလ် လေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ လည်း တခြား အသုံးဝင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် မစမ်းသပ်နိုင်သေးလို့ ကျွန်တော်သုံး စမ်းသပ် ဖူးတာလေးတင် ရေးသားတင်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျာ။
အမှားများ ပါလာခဲ့လျှင် ပြန်လည် ထောက်ပြ ပေးကြပါလို့ တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျ။
အိုက်စကရင် ဆန်းဒေး (သီးစုံအိုက်စကရင်) တစ်ခွက်ပင် ဘယ်လောက်မှ များများစားစား မပေးရသည့်ကာလ။
၁၀ နှစ်ရွယ် ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟိုတယ် ကော်ဖီခန်းထဲ ၀င်ကာ စားပွဲတစ်လုံးမှာ ထိုင်သည်။ စားပွဲထိုး အမျိုးသမီး တစ်ယောက် သူရှေ့ရောက်လာကာ ရေတစ်ခွက် ချပေးပြီးနောက် သူ ဘာမှာမလဲ စောင့်ဆိုင်း နေသည်။
” အိုက်စကရင်ဆန်းဒေးတစ်ခွက် ဘယ်လောက်လဲ ခင်ဗျ”
” ဆင့် ငါးဆယ်ပါ ” စားပွဲတိုးက ဖြေသည်။
ကောင်းလေးက သူ့အိတ်ထဲမှ အကြွေစေ့တွေ နှိုက်ထုတ်ကာ ရေတွက်သည်။ ပြီးတော့၊ ‘ အိုက်စကရင်ရိုးရိုးတစ်ခွက် ဆိုရင်ကောဗျာ ‘ ဟု မေးသည်။
ထိုင်စရာနေရာ မရသေးသည့်ဧည့်သည်တချို့လည်းရှိနေတော့ စားပွဲထိုး အမျိုးသမီး သိပ်စိတ်မရှည်ချင်။
” သုံးဆယ့်ငါးဆင့် ” သူက တိုတိုပြတ်ပြတ် ဖြေသည်။
ကောင်လေးက သူ့ ပိုက်ဆံပြားတွေ ရေတွက်ပြန်သည်။ ထိုနောက် ” အိုက်စကရင် ရိုးရိုးတစ်ခွက်ပဲ ပေးပါ ခင်ဗျာ” ဟု ဆိုသည်။
အမျိုးသမီးက အိုက်စကရင် ယူလာသည်။ ဘီလ်စာရွတ်ကိုပါ တစ်ပါးတည်း စားပွဲပေါ် တင်ပေးခဲ့ပြီး လှည့်ထွက်သွားသည်။
ကောင်လေး အိုက်စကရင်ကိုစားပြီးနောက်ကောင်တာမှာ ငွေသွားရှင်းသည်။ ပြီး ထွက်ခွာသွားသည်။
စားပွဲထိုးအမျိုးသမီး ကောင်လေးထိုင်သည့် စားပွဲဆီ ပြန်လာပြီး ခုံကို သုတ်သည့်အခါ မြင်လိုက်ရသော အရာကြောင့် သူ့ရင်ထဲ လှိုက်ခနဲဖြစ်သွားသည်။ ကောင်လေး စားသွားသည့် အိုက်စကရင်ခွက်နံဘေးတွင် ငါးဆင့်စေ့ နှစ်စေ့နှင့် တစ်ဆင့်စေ့ ငါးစေ့ ညီညီညာညာလေးပုံ ၍ထားသည်။
[ မူရင်း။ ။ The Best of Bits & Pieces မှ Tw0 Nickels and Five Pennies ]
နှလုံးသား အာဟာရ စာအုပ် (၂) မှ.…
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 12:51 AM0comments Links to this post
မြို့ကြီးတစ်မြို့၏အ၀င်ဝနား ခရီးသွားတစ်ယောက် ဆိုက်ရောက်လာသည်။
မြို့ထဲမ၀င်မီ လမ်းဘေးမှာ ထိုင်နေသည့် မိန်းမတစ်ယောက်ကို သူ မေးသည်။
” ဒီမြို့ကလူတွေ ဘယ်လိုစိတ်သဘောထားမျိုး ရှိကြသလဲဗျ”။
အမျိုးသမီးက ပြန်မေးသည်။ ” ရှင်ထွက်လာခဲ့တဲ့မြို့က လူတွေကော ဘယ်လိုသဘောထားမျိုး ရှိကြသလဲ”
” ဆိုးပါ့ဗျာ၊ အင်မတန် ယုတ်မာကောက်ကျစ်တဲ့ လူတွေ၊ လုံးဝ ယုံကြည်လို့မရတဲ့ လူတွေ၊ ကောင်းကွက်ဆိုလို့ တစ်စက်ကလေးမှ မရှိတဲ့လူတွေ ” သူက မဲ့မဲ့ရွဲ့ရွဲ့ ပြန်ဖြေသည်။
” အင်း၊ ဒီမြို့ထဲက လူတွေလဲ အဲဒီပုံစံအတိုင်းပဲ ရှင် တွေ့ရဦးမှာပါ ” အမျိုးသမီးက ဆိုလိုက်သည်။
များမကြာမီပင် နောက်ခရီးသည် တစ်ယောက် မြို့နား ရောက်လာပြန်ကာ အမျိုးသမီးအား မြို့ထဲက လူတွေ အကြောင်း မေးပြန်သည်။ သည်အခါ အမျိုးသမီးကလည်း ပထမခရီးသည်တုန်းကအတိုင်း သူ လာခဲ့သည့်မြို့က လူတွေအကြောင်း ပြန်လှန်မေးခွန်းထုတ်ပြန်သည်။
” အင်မတန် စိတ်သဘောထားကောင်းကြပါတယ်ဗျာ။ ရိုးသားတယ်၊ အလုပ်ကြိုးစားတယ်၊ သူမတူအောင်လဲရက်ရောကြပါတယ်၊ ကျွန်တော် အဲဒီက ထွက်လာရတာ စိတ်မကောင်းဘူး ” ဒုတိယခရီးသည်က လှိုက်လှဲသော လေသံဖြင့် ဆိုလေသည်။
သည်အခါ ပညာရှိ အမျိုးသမီး အဖြေပေးလိုက်သည်။
” ရှေ့က မြို့ထဲမှာလဲ အဲဒီလိုလူမျိုးတွေပဲ ရှင်ထပ်တွေ့ရမှာပါ ” ဟူ၍။
[ မူရင်း။ ။ The Best of Bits and Pieces မှ A Tale of Two Cities ]
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 12:50 AM0comments Links to this post
ဟာသလေး တွေကတော့ ရောက်လာပြန်ပြီဗျာ. ရောက်လာပြီဆိုတော့လည်း ကျွန်တော် တစ်ယောက်ထဲ ဖတ်ပြီး ရယ်ရယုံ နဲ့ အားမရလို့ အားလုံးအတွက် ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်တယ်နော်.. ဒီထဲက တစ်ပုဒ်ကတော့ အရင်တစ်ခါ တင်ထားတဲ့ထဲမှာတော့ ပါပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..
ခေါင်းစဉ်ကြည့်ကတည်းက သိသာပါတယ်။ ဒီပို့စ်ဟာ ရိုင်းရင်လည်းရိုင်းမယ်။
အဓိပ္ပါယ်မဲ့ရင်လည်း မဲ့မယ်။ အဆဲခံထိရင်လည်း ထိမယ်။ ဒါပေမယ့်
ပြုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ (မပြုံးလည်းရပါတယ်.. အတုတော့မခိုးပါနဲ့ )
(၁) ကိုယ်ချင်းစာတဲ့ တိတ်တိတ်ပုန်း
မိန်းမတစ်ယောက် ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ နောက်မီးလင်းနေတုန်းမှာ
အိမ်ရှင်ယောက်ျား တံခါးဖွင့်သံကို ကြားလိုက်တယ်။
“မြန်မြန်…. ဒီထောင့်မှာရပ်နေ.. မလှုပ်နဲ့”
မိန်းမကပြောပြောဆိုဆို သူ့ကိုထောင့်တစ်နေရာမှာ ရပ်ခိုင်းပြီး
တစ်ကိုယ်လုံး အလှဆီတွေလိမ်းပေးပြီး ပေါင်ဒါမုန့်တွေ လူးပေးလိုက်တယ်။
“မလှုပ်နဲ့နော်… ရုပ်တုတစ်ခုလို ငြိမ်ငြိမ်လေးရပ်နေ”
အိမ်ရှင်ယောက်ျား အိပ်ခန်းထဲရောက်လို့ ပေါင်ဒါမုန့်တွေ
ဖြူနေတဲ့ရုပ်တုကြီးနဲ့ ကြမ်းပြင်ပေါ်ပွနေတဲ့ အမှုန့်တွေကိုတွေ့တော့
ဘာလဲလို့မေးတယ်။ မိန်းမက တည်ငြိမ်အေးဆေးတဲ့အသံနဲ့ “အော်… ရုပ်တုပါ။
မဦးတို့အိမ်မှာလည်း တစ်ခုတွေ့ခဲ့လို့ ကျွန်မကြိုက်တာနဲ့ တစ်ခုဝယ်ခဲ့တယ်”
အဲဒီလိုနဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက် ရုပ်တုအကြောင်းကို ဆက်မပြောဘဲ
အိပ်ရာဝင်ခဲ့ကြတယ်။ ညသန်းခေါင်ရောက်တော့ အိမ်ရှင်ယောက်ျားက
မီးဖိုထဲထသွားခဲ့တယ်။ မီးဖိုက ထွက်လာတော့ သူ့လက်ထဲမှာ
ပေါင်မုန့်တချို့နဲ့ နွားနို့တစ်ခွက် ပါလာတယ်။ အိမ်ရှင်ယောက်ျားက
ရုပ်တုရှေ့မှာရပ်ပြီး “ရော့… အစာနည်းနည်းစားလိုက်အုန်း၊
ငါ့လိုမဖြစ်စေနဲ့… ငါတုန်းက မဦးအိမ်မှာ အစာမစား ရေမသောက်ရဘဲ ၃ ရက် ၃ ည
(၂) လိပ်ပြာမလုံတဲ့ တိတ်တိတ်ပုန်း
ဒီလင်မယားနှစ်ယောက်စလုံး နောက်မီးလင်းကြတယ်။ ယောက်ျားက ည ည
အကြောင်းပြပြီး အပြင်ထွက်တယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ညမှာ လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံး
ဆုံကြပြီး ကိုယ်လုပ်တဲ့အပြစ်အတွက် နေမထိထိုင်မသာ ဖြစ်နေကြတယ်။ နှစ်ဦးသား
ညအိပ်ရာဝင်ပြီး မနက်မိုးလင်းခါနီးအရောက်မှာ မိန်းမဖြစ်သူက ရုတ်တရက်
“ဒုက္ခပဲ.. ဒုက္ခပဲ… ကျွန်မယောက်ျားပြန်လာပြီ”
မိန်းမအော်သံလည်းကြားရော ယောက်ျားဖြစ်သူက သူ့အဝတ်အစားတွေ ကပျာကယာယူပြီး
(၃) တိုက်ဆိုင်တဲ့ တိတ်တိတ်ပုန်း
အိမ်မှာယောက်ျားမရှိတုန်း မိန်းမက တခြားယောက်ျားနဲ့ တိတ်တိတ်ပုန်းနေတယ်။
အဲဒီမှာ ရုတ်တရက် ယောက်ျားကားသံကြားတော့ မိန်းမက “နင့်အဝတ်အစားတွေ
“ငါ့ယောက်ျားမိရင် ငါတို့နှစ်ယောက်လုံးသေမှာ သွား.. သွား…”
မိန်းမက အင်္ကျီတွေအတင်းထိုးထည့်ပေးပြီး ပြေးခိုင်းတယ်။ အဲဒီလူလည်း
ပြတင်းပေါက်က ခုန်ချလိုက်တာ မာရသွန်ပြေးနေတဲ့
“ခင်ဗျား တုံးလုံးပြေးရတာ ဝါသနာပါတာလား”
“ဟုတ်ကဲ့ .. ဒါမှ ဆန့်ကျင်ဖက်လေဖိအားတွေ လျော့မှာ”
“ပြေးနေတဲ့အချိန် အဝတ်အစားကိုင်ပြီး ပြေးတတ်တာလား”
“ဟုတ်ကဲ့… ပန်းဝင်တာနဲ့ ကျွန်တော်ပြန်ဝတ်လိုက်လို့ရပါ
တယ်”“ခင်ဗျား ခါတိုင်းလည်း ကွန်ဒုံးတပ်ပြီး ပြေးတတ်တာလား”
(၄) ပဟေဠိ တိတ်တိတ်ပုန်း
ပင်လယ်ကမ်းစပ် ရွာတစ်ရွာက အိမ်ရှင်ယောက်ျားတွေဟာ မကြာခဏ ပင်လယ်ထဲသွားပြီး
ငါးသွားရှာကြတယ်။ အိမ်ရှင်ယောက်ျားမရှိတဲ့အချိန် မိန်းမတွေက
ဖောက်ပြန်ကြတယ်။ ဖောက်ပြန်ပြီးတိုင်းလည်း ဖာသာဆီသွားပြီး
အမှားဝန်ခံကြတယ်။ ကြာလာတော့ ဖာသာကမိန်းမတွေကို “နောက်တစ်ခါ လာဝန်ခံကြရင်
ခိုးစားတယ်လို့မပြောဘဲ “ချော်လဲတယ်”လို့ ပြောပါ။ ချော်လဲလာတယ်လို့
ပြောရင် ငါသိပြီ” လို့ မှာလိုက်တယ်။
နောက်တော့ ဖာသာအသက်ကြီးပြီး နောက်ဖာသာအသစ်တစ်ယောက်ပြောင်းတယ်။
မပြောင်းခင် ရွာသူကြီးကို “ချော်လဲတယ်”ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုပြောပြပြီး
နောက်ဖာသာကိုရှင်းပြဖို့ မှာခဲ့တယ်။ ဖာသာအသစ်ရောက်လာတော့ သူကြီးက
ရွာထဲ မိန်းမတွေက အရင်အတိုင်းပဲ ခိုးစားပြီးတိုင်း ဖာသာအသစ်ဆီသွားပြီး
ဝန်ခံကြတယ်။ ချော်လဲတဲ့လူတွေ များနေတာကြောင့် ဖာသာက သူကြီးဆီသွားပြီး
မိန်းမတွေ မကြာခဏချော်လဲနေတာကြောင့် ရွာထဲကလမ်းတွေ ပြုပြင်သင့်ကြောင်း
ပြောပြတယ်။ ဖာသာစကားကိုကြားတော့ သူကြီးက ထရယ်တယ်။ အားရပါးရ
ရယ်နေတဲ့သူကြီးကိုကြည့်ပြီး ဖာသာနားမလည်စွာနဲ့ ထအော်တယ်။
“သူကြီး… ခင်ဗျား ဘာရယ်နေတာလဲ! ဒီတစ်ပတ်အတွင်း ခင်ဗျားမိန်းမ ချော်လဲတာ
(၅) မေ့မရတဲ့ တိတ်တိတ်ပုန်း
လူတစ်ယောက် .. သူက အလောင်းတွေ အခေါင်းထဲမထည့်ခင် ရေချိုး၊ စစ်ဆေးမှုတွေ
ပြုပေးရတဲ့လူဖြစ်တယ်။ တစ်ခါက ဦးခင်ရဲ့အလောင်းကို ရေချိုးစစ်ဆေးနေတုန်း
အံ့သြစရာတစ်ခု သူသွားတွေ့တယ်။ အဲဒါက ဦးခင်ရဲ့မွေးရာပါဟာ သာမန်ထက်
ကြီးနေလို့ဖြစ်တယ်။ ဒါနဲ့သူက “ဦးခင်.. ဦးခင်.. ကန်တော့ပါနော်။ ခင်ဗျားကို
ကျွန်တော် ဒီအတိုင်း မီးသင်္ဂြိုလ်လိုက်လို့မဖြစ်ဘူး။ ခင်ဗျားရဲ့
ခင်ဗျားချန်ခဲ့မှဖြစ်မယ်” ဆိုပြီး ဦးခင်ရဲ့မွေးရာပါကို
အဲဒီနောက် အိမ်ပြန်ရောက်တော့ မိန်းမကိုပြချင်တာနဲ့ “မိန်းမရေ..
မိန်းမရေ.. ဒီမှာလာကြည့် နင်လုံးဝ မယုံနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခု ငါပြမယ်”
ဆိုပြီး အထုပ်ကို ဖြည်ပြလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ မိန်းမက ထအော်တယ်။
“အမလေး… ဦးခင်ကြီး သေသွားပြီလား!”
(၆) မတော်တဆ တိတ်တိတ်ပုန်း
ငယ်ရွယ်တဲ့ လင်မယားနှစ်ဦးမှာ လှပတဲ့သမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်
ယောက်ျားလေးတစ်ယောက် ထပ်မွေးဖို့ သူတို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်။
မိန်းမမှာကိုယ်ဝန်ရှိသွားခဲ့တယ်။ (၉)လနေပြီးနောက် မိန်းမက
သားယောက်ျားလေးတစ်ဦးမွေးခဲ့တယ်။ ယောက်ျားလုပ်သူက ဝမ်းသာအားရ
ကလေးခန်းထဲပြေးဝင်ပြီး အခုမှ အမေ့ဝမ်းကကျွတ်လာတဲ့
သားလေးကိုသွားကြည့်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အရမ်းရုပ်ဆိုးတဲ့ သားကိုတွေ့တော့
သူလန့်သွားခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့မိန်းမဆီသွားပြီး ဒေါသတကြီးနဲ့ “ငါ့နောက်ကွယ်မှာ
မင်းခိုးစားခဲ့တာလား!” လို့မေးတယ်။ မိန်းမက အချိုသာဆုံးပြုံးပြီး
“ဟင့်အင်း… ဒီတစ်ခေါက် မဟုတ်ဘူး” လို့ဖြေလိုက်တယ်။
(၇) အူတူတူ တိတ်တိတ်ပုန်း
ဦးလှအိမ်ပြန်ရောက်တော့ သားက ကြမ်းပြင်ပေါ်ထိုင်ပြီး ငိုနေတယ်။
အိပ်ခန်းထဲ ဦးလှပြေးဝင်ကြည့်တော့ ကုတင်ပေါ်မှာ ချွေးတစို့စို့နဲ့
အမောဖောက်နေတဲ့ မိန်းမကိုတွေ့လိုက်တယ်။ ချွေးသုတ်ဖို့ ရေချိုးခန်းထဲ
တဘက်ဝင်ယူတော့ ရေချိုးခန်းထဲမှာ တုံးလုံးကြီးရပ်နေတဲ့ ဘေးအိမ်ကဦးမြကို
“ခင်ဗျားဗျာ…. ကျုပ်မိန်းမ နှလုံးရောဂါထနေတာကို မပြုစုဘဲ
တုံးလုံးကြီးချွတ်ပြီး ကျုပ်သားကို ခြောက်နေရသလားဗျာ”
(၈) အံဝင်ခွင်ကျ တိတ်တိတ်ပုန်း
လူတစ်ယောက်က သူ့သေနတ်ပေါ် မှန်ပြောင်းတစ်လက်တပ်ဖို့
မှန်ပြောင်းရောင်းဆိုင် တစ်ဆိုင်နား ရောက်လာခဲ့တယ်။
“ဒီမှန်ပြောင်းက အရမ်းမိုက်တယ်။ ဒီကနေ ဟိုးတောင်ကုန်းပေါ်က အိမ်ကို
ခင်ဗျားရှင်းရှင်းလင်းလင်း တွေ့နိုင်တယ်” ဆိုင်ရှင်က မှန်ပြောင်းတစ်ခု
“ဟုတ်လား!” မှန်ပြောင်းဝယ်သူက ဆိုင်ရှင်ပြောတဲ့ဖက်
မှန်ပြောင်းယူပြီးကြည့်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ရုတ်တရက် တဟားဟား ထရယ်တယ်။
“အဲဒီအိမ်ရဲ့ အခန်းထဲမှာ ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်
ဆိုင်ရှင်က မှန်ပြောင်းကို ဆတ်ခနဲ့ဆွဲယူပြီး ကြည့်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့
တစ်ကိုယ်လုံး တဆတ်ဆတ်တုန်ပြီး ဒေါသတကြီးနဲ့ ကျည်ဆံနှစ်တောင့်ယူလိုက်တယ်။
“အဲဒါ ကျုပ်အိမ်ဗျ… ကျုပ်မိန်းမရဲ့ခေါင်းနဲ့ ဟိုကောင်ရဲ့မွေးရာပါကို
ဒီကျည်နှစ်တောင့်နဲ့ ခင်ဗျားပစ်နိုင်ရင် ဒီမှန်ပြောင်း ခင်ဗျားကို
ဝယ်တဲ့သူက မှန်ပြောင်းနဲ့ သေသေချာချာကြည့်ပြီး ပြောလိုက်တယ်။
“ခင်ဗျားသိလား! ဒီကျည်တစ်တောင့်ထဲနဲ့ လုံလောက်တယ်”
မှတ်ချက်….. တကယ်လို့ ဒီ “တိတ်တိတ်ပုန်းဟာသ” က ရယ်ရတယ်ဆိုခဲ့ရင်
တိတ်တိတ်ပုန်းပြီး မရယ်ပါနဲ့… သူငယ်ချင်းတွေကို မျှဝေပြီး
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 12:48 AM 1 comments Links to this post
ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း ၀ှစ်(တ)က မျက်လှည့် ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူ့ကို လော့စ်အိန်ဂျလိ(စ)ရှိစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်က ဆိုင်မှာ စားသုံးသူများကို ဧည့်ခံဖျော်ဖြေသော သဘောဖြင့် ၀ိုင်းတကာ လှည့်၍ အနီးကပ် မျက်လှည့်ပြပေးရန် ငှားရမ်းထားသည်။
တစ်ညမှာ သူက မိသားစု စားသောက်ဝိုင်းတစ်ခုထဲ ၀င်ပြီး သူ့ကိုယ်သူ မိတ်ဆက်ကာ မျက်လှည့်ပြရန်အတွက် ဖဲတစ်ထုပ် အိတ်ထဲမှ ထုတ်သည်။ ထို့နောက် ၀ိုင်းထဲမှ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အား ” ကဲ၊ သမီး ဒီအထဲက ဖဲတစ်ချပ်ရွေးစမ်းကွာ ” ဟု ဆိုလိုက်သည်။သည်အခါ မိန်းကလေး၏ ဖခင်က သမီး ၀င်ဒီမျာ မျက်စိ မမြင်သည့်အကြောင်း ပြောပြသည်။
” ဟာ ၊ ဟုတ်လား ၊ ဒါလဲ ကိစ္စမရှိပါဘူး ” ၀ှစ်(တ)က ဆိုသည်။ ” သူ့အတွက် အနှောက်အယှက် မဖြစ်ဘူး ဆိုရင် ကျွန်တော်မျက်လှည်တစ်ကွက်လောက်တော့ ပြချင်ပါသေးတယ်” ဆိုပြီး မိန်းကလေး ဘက်သို့ လှည့်ကာ ” ၀င်ဒီ ၊ ဦးရဲ့ မျက်လှည့်ပြကွက်မှာ နည်းနည်း ၀င်ကူပေးပါလား ” ဟု ပြောလိုက်သည်။
၀င်ဒီက နည်းနည်း တော့ ရှက်တက်သူလေး ဖြစ်သည်။ သူက ပခုံးနှစ်ဖက် တွန့်လိုက်ပြီးနောက် “ ဟုတ်ကဲ့ ၊ ရပါတယ် ” ဟု အဖြေပေးသည်။
၀ှစ်(တ)က စားပွဲမှာ ၀င်ဒီနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် နေရာ၌ ၀င်ထိုင်လိုက်သည်။ ပြီး ” ၀င်ဒီ ၊ သမီးကို ဖဲချပ် တစ်ချပ် ထောင်ပြမယ်၊ အဲဒီဖဲဟာ အရောင်နှစ်မျိုးထဲက တစ်မျိုးမျိုး ဖြစ်မယ်၊ အနီရောင် ဒါမှ မဟုတ် အနက်ရောင်၊ ၀င်ဒီ့ကို ဦးလုပ်စေချင်တာက ၀င်ဒီရဲ့ စိတ်စွမ်းအင်တွေ သုံး ပြီး ဒီဖဲချပ်ရြ့ အရောင်ဟာ ဘာလဲ၊ အနီလား၊ အနက်လား ဆိုတာ ပြောပေးဖို့ပဲ၊ သမီးသဘောပေါကတယ်နော် ”
၀ှစ်(တ)က ညှင်း ကင်းဖဲ တစ်ချပ်ကို ထောင်ပြပြီး ” ၀င်ဒီ ၊ ဒါ အနီလား အနက်လား ” မေးသည်။
ခဏလေးနေပြီးနောက် မျက်မမြင် ကောင်မလေးက “အနက် ” ဟုဆိုလိုက်သည်။ မိသားစု မျက်နှာအားလုံး ပြုံးသွားသည်။
၀ှစ်(တ၀က ပိမ့်(ဟတ်) ခုနှစ် ဖဲချပ်ကို ထောင်ပြပြီး ဒါ အနီလား အနက်လား မေးပြန်သည်။
“အနီ ” ၀င်ဒီက ဖြေသည်။
အဲသည်နောက် တတိယမြောက်အဖြစ် ထောင့် (ဒိုင်းမွန်း) သုံး ဖဲချပ်ကို ထောင်ပြသည်။ “အနီလား ၊ အနက်လား ”
၀င်ဒီက မဆိုင်းမတွပင် “အနီ ” ဟုဖြေသည်။
မိသားစုက တဘောကျပြီး ရယ်ကြသည်။ သူတို့ အား လုံး စိတ်လှုပ်ရှားနေသည်။ ၀ှစ်(တ) က နောက်ထပ် ဖဲသုံးချပ် ဆက်ပြသည်။ သုံးချပ်လုံးပင် ၀င်ဒီမှန်အောင်ဖြေနိုင်သည်။ အံ့သြစရာ၊ ခြောက်ချပ်မှာ ခြောက်ချပ်စလုံး မှန်သည်။ ၀င်ဒီကံကောင်းလှပုံကို မိသားစုအဖို့ မယုံနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်နေသည်။
သတ္တမမြောက်အဖြစ် ၀ှစ်(တ) က ပိမ့်ငါးဖဲချပ်ကို ကောက်ကိုင်သည်။ သူက ဖဲချပ်ကို ထောင်ပြပြီး၊ ” ၀င်ဒီ၊ ဒီတစ်ခါ ဂဏန်းကိုလဲ ပြောမယ်၊ ဘာဖဲ ဆိုတာလဲ ပြောရမယ်၊ ဟတ်လား ၊ ဒိုင်းမွန်းလား၊ ကလပ်လား၊ စပိတ်(ဖူး) လား ၊ ဟုတ်ပြီနော်. ”
ခဏလေးအကြာမှာ ၀င်ဒီက ရဲရဲ ၀ံ့ဝဲ့ ဖြေသည်။
“ငါးဂဏန်း၊ ဟတ်ဖဲ ”
မသားစု ဟာခနဲဖြစ်သွားကြသည်။ သူတို့ အကြီးအကျယ် အံ့အားသင့်နေသည်။
” ဒါ ရိုးရိုးလှည့်ကွက် တစ်ခုလား၊ ဒါမှ မဟုတ် `ပညာ` တစ်ခုခုလား ” ၀င်ဒီ၏ ဖခင်က မေးသည်။
” အဲဒါကတော့ ၀င်ဒီ့ကိုပဲ မေးကြည့်ပါ ” ၀ှစ် (တ) ဖြေသည်။
” ၀င်ဒီ ၊ သမီးဘယ်လိုသိလဲသလဲ “ အဖေက မေးသည်။ ၀င်ဒီက ပြုံး၍ ဖြေသည်။ ” ဒါက ပညာ၊ အဖေရဲ့၊”
၀ှစ်(တ)က ၀င်ဒီနှင့် မိသားစုကို နှုတ်ဆက်ကာ သူ့လိပ်စာ ကတ်ပြားလေး ပေးပြီးထွက်လာခဲ့သည်။ သည်မိသားစုအတွက် မမေ့ပျောက်နိုင်စရာ အတွေ့အကြုံတစ်ခု သူ ဖန်တီးပေးခဲ့ပြီ။
မိသားစုအဖို့ ပြဿနာက ဖဲချပ်တွေ ၀င်ဒီ ဘယ်လိုလုပ် သိသလဲဆိုတာ ပဲ ဖြစ်သည်။ ၀ှစ်(တ)ဆိုသော သူကို သည်စားသောက်ဆိုင်ရောက်မှ ၀င်ဒီ တွေ့ရဖြင်း ဖြစ်သည်။ ဘယ်ဖဲဟာ အနီ ဘယ်ဖဲဟာ အနက်ဆိုတာတွေ သူဘယ်နည်းနှင့်မျှ ကြိုတင်ပြောပြမထားနိုင်။ ၀င်ဒီက လည်း မျက်စိမမြင်ဘူး ဆိုတော့ ထောင်ပြသည့် အချိန်မှာ မြင်နိုင်သိနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိ။ သို့ဖြစ်လျှင် ဘယ်လိုလဲ။
သည်မိသားစုအတွက် တစ်သက်မှာတစ်ခါဟု ဆိုရမည့် ထူးခြားလှသော ထိုပြကွက်ကို ၀ှစ်(တ)က ရုတ်တရက်ပေါ်လာသည့် ဖြတ်ထိုးဥာဏ် နှင့် အချက်ပြ ဆက်သွယ်နည်း စနစ်တစ်ခုကို သုံးပြီး ဖန်တီးပြသသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဟိုးအရင် မျက်လှည့်သမားဘ၀ စတင်စဉ်က ခြေထောက်ဖြင့် အချက်ပြဆက်သွယ်သည့် နည်စနစ်တစ်ခု သူစမ်းသပ် လော့ကျင့်ခဲ့ဖူးသည်။ သို့သော် ၀င်ဒီတို့နှင့် တွေ့သည်အထိ တစ်ကြိမ်မျှ လက်တွေ့ သုံးစွဲခွင့်မရခဲ့သေး။
ထိုနေ့က ၀ိုင်းထဲတွင် ၀င်ဒီရှေ့ ၀င်ထိုင်ပြီး ” ၀င်ဒီ၊ သမီးကို ဖဲချပ် တစ်ချပ် ထောင်ပြမယ်၊ အဲဒီဖဲဟာ အရောင် နှစ်မျိုးထဲက တစ်မျိုးမျိုးဖြစ်မယ်၊ အနီရောင် ဒါမှ မဟုတ် အနက်ရောင် ..” ဟူ၍ ပြောသည့်အခါ ၀င်ဒီ့ခြေထောက်ကို (စားပွဲအောက်၌) `အနီ` ဆိုသည့် အချိန်၌ တစ်ချက်၊ `အနက် ` ဆိုသည့် အချိန်၌ နှစ်ချက် ခြေနှင့် တို့ပြီး အချက်ပြသည်။
ထို့နောက် ပို၍ သေချာစေရန်အတွက် ” …….၊ ၀င်ဒီ့ ကို ဦးလုပ်စေချင်တာက ၀င်ဒီရဲ့ စိတ်စွမ်းအင်တွေ သုံးပြီး ဒီဖဲချပ်ရဲ့ အရောင်ဟာ ဘာလဲ၊ အနီလား (ခြေနှင့် တစ်ချက်တို့ သည်) အနက်လား (နှစ်ချက်တို့သည်) ဆိုတာ ပြောဖို့ဖဲ၊ သမီးသဘောပေါက်တယ်နော်” ဟူ၍ သူထပ်ပြောသည်။
အဲသည်နောက် ၀င်ဒီခေါင်းညိတ်တာ ကြည့်ပြီးသူသဘောပေါက်ကြောင်း၊ မျက်လှည့်ပြရာမှာ မိမိနှင့် အတူ ပါဝင်လိုစိတ် ရှိကြောင်း သိလိုက်သည်။ မိသားစုကတော့ ၊ ” ….သမီးသဘောပေါက်တယ်နော် ” ဟု ၀ှစ်(တ)ပြောလိုက်သည်ကို ၀င်ဒီနှင့် ညှိလိုက်ဖြင်း ဖြစ်ကြောင်းမရိမိကြ၊ သူရှင်းပြသည်များကို နားလည်မလည်သေချာအောင် မေးခြင်းပဲဟု သွေးရိုးသားရိုးမှတ်ယူကြသည်။
ငါးဂဏန်း ဟတ်ဖဲချပ်နှင့် ပတ်သတ်၍ကော ဘယ်လို အချက်ပြသနည်း။ ဒါလည်း လွယ်ပါသည်။ ငါးဂဏန်း ဖြစ်ကြောင်းသိအောင် ခြေထောက်ကို ငါးချက်တို့သည်။ ဟတ်ဖဲဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်ရန်အတွက်က၊… `ဟုတ်လား၊ ဒိုင်းမွန်းလား၊ ကလပ်လား၊ စပိတ်လား` မေးသည့်အချိန်၌ `ဟတ်` ဟု ပြောစဉ် ခြေကို တို့ထားခဲ့သည်။
လုပ်ပုံလုပ်နည်း သိပြီဆိုလျှင် သည်ပြကွက်က အံ့သြစရာ သိပ်မရှိတော့ပါ။ သို့သော် သ ည်ပြကွက်ကြောင့် ၀င်ဒီ့မှာ ဖြစ်သည့် အပြောင်းအလဲကတော့ အံ့သြဖွယ်ပင်။ အဲသည်နေ့က စားသောက်ဆိုင်မှာ မိသားစုဝိုင်းတွင် သူက အထင်ပေါ်ဆုံး အာရုံအစူး စိုက်ခံရဆုံး ဖြစ်ခဲ့သည်။ အိမ်မှာလည်း သူက ဆက်ပြီး `စတား` ဖြစ်နေသည်။ စိတ်စွမ်းအင်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် သူမ၏ အံ့ဖွယ် ပြကွက်အကြောင်းကို မိသားစုက မိတ်ဆွေမှန်သမျှကို ဖောက်သည်ချ၍မဆုံးနိုင်။
လအနည်းငယ်ကြာသည့်အခါ၌မူ ၀င်ဒီ့ထံမှ လက်ဆောင် ပစ္စည်းထုပ်ကလေးတစ်ခု ၀ှစ်(တ)ရရှိသည်။ လက်ဆောင်ထုပ်ထဲတွင် မျက်မမြင်များ ကစားနိုင်ရန် စီမံထားသည့် ဘရေးလ်ဖဲတစ်တုပ် နှင့် စာတစ်စောင် ပါသည်။ စာ၌ မိမိအား အများကြားမှာ အရေးပါသူအဖြစ်ခံစားရစေရန်နှင့် ထိုအခိုက်အတန့် အဖို့ မျက်စိ `မြင်` ခွင့်ရရှိအောင် ကူညီပေးခဲ့ဖြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း၊ မိမိအား မိသားစုက အကြိမ်ကြိမ်မေးမြန်းကြသော်လည်း လှည့်ကွက်ကို ယခုထိ မိမိဖော်မပြောသေးသည့်အကြောင်းနှင့် နောင်တွင် မျက်မမြင်များနှင့် မျက်လှည့်ပြကွက်တွေ ယခုထက် ပို၍ လုပ်နိုင်စေရန် ၀ှစ်(တ) ထဲ ဘရေးလ် ဖဲ တစ်ထုပ် ပေးပို့လိုက်ခြာင်းဖြစ်ကြောင်း များ ၀င်ဒီရေးသားလိုက်လေသည်။
မူရင်း။ ။ Michael Jeffreys ၏ How Magic HelpedaBlind Girl See.
Photoshop Portable ကြိုက်သူတွေ အတွက် Portable လေးတွေ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်..
Adobe Photoshop CS3 Protable
kothetnaing blog မှ donwload link အားပြန်လည်မျှဝေသည်။
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 6:28 PM0comments Links to this post
နာမည်ကျော် ဂျာမန်ဂီတဆရာကြီး မင်ဒဲလ်ဇွန်း၏ အဘိုးဖြစ်သူ မိုးဇက်မင်ဒဲလ်ဇွန်းသည် အလွန်အရုပ်ဆိုး အကျည်းတန်သူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ လူက အရပ်ပုပြီး ကျောမှာ ဘုကြီးတစ်ခု ရှိကာ ခါးကုန်းနေသည်။
တစ်နေ့တွင် ဟမ်းဘွတ်မြို့ရှိ ကုန်သည်ကြီးတစ်ဦးထံ သူအလည်ရောက်ရှိသည်။ ကုန်သည်ကြီးမှာ ဖရွမ်တီထဲ အမည်ရှိ သမီးချောတစ်ယောက်ရှိသည်။ သူကလေးကိုမြင်တော့ မိုးဇက် အရူးအမူး ချစ်မိသည်။ သို့သော် ဖရွမ်တီယဲအဖို့တော့ သူ့ရုပ်ကို မြင်ရသည်ကပင် အော်ဂလီဆန်ချင်စရာ။
မည်သို့ဖြစ်စေ၊ ပြန်ခါနီး အချိန်မှာတော့ မိုးဇက် အားတင်းက အပေါ်ထပ်ရှိ သူမအခန်းဆီသို့ တက်သွားပြီး စကားပြောဆိုရန် ကြိုးစားသည်။ သူမ၏ရုပ်သွင်က ကောင်းကင်ဘုံက နတ်မိမယ်ပမာ တင့်တယ် လွန်းလှသည်။ သို့သော် သူ့ကိုသာ မျက်လွှာ တစ်ချက်ပင့်၍မျှမကြည့်။
သူ့ရင်ထဲ ကြေကွဲလျက်နှင့်ပင် သူ အကြိမ်ကြိမ်စကား စ,ကြည့်သည်။ မရ။
နောက်တော့ ရှက်ရွံစွာပင် သူစကား တစ်ခွန်းဆိုသည်။
” အိမ်ထောင်ဖက်ဆိုတာ ကောင်းကင်ဘုံက ရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့အတိုင်း ဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့စကား မင်း ယုံသလား” ဟု သူမေးတော့၊
” ယုံတယ် ၊ ရှင်ကော ” တဲ့ ။ သူမက ခေါင်းငုံ့လျက် ပင် ပြန်ပြောသည်။
” ကိုယ်လဲ သိပ်ယုံကြည်တာပေါ့ ” ဟု သူက ဆိုသည်။ ” ဒီမှာ ကိုယ်ပြောပြမယ်၊ ယောကျာ်းလေး တစ်ယောက် လူ့ပြည်ကို မွေးဖွား ရောက်ရှိတော့မယ့် အခါ တိုင်း လူ့ပြည်မှာ သူနဲ့ ထိမ်းမြားရမယ့် မိန်းကလေးဟာ ဘယ်သူဘယ်ဝါပဲလို့ ကြေညာပေးလေ့ရှိတယ်၊ ကိုယ့်ကိုမွေးလာတဲ့အချိန် ကိုယ်နဲ့ လက်ထပ်ရမယ့် မိန်းကလေးကို ပြပြီး ဖန်ဆင်းရှင်က ပြောတယ် ၊ ” မင်းရဲ့ ဇနီးသည်ကတော့ ကျောမှာ ဘုတစ်ခုနဲ့ ခါးကုန်းမလေး ဖြစ်နေရှာ” တဲ့ ၊ အဲဒီတော့ ကိုယ်က ပြောလိုက်တယ်၊ ” မိန်းကလေးတစ်ယောက်အဖို့ ကျောမှာဘုနဲ့ခါးကုန်းမလေး ဖြစ်ရရှာမယ်ဆိုရင် သိပ်ကို ကြေကွဲဝမ်းနည်းစရာပါ၊ ဒါကြောင့်မို့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် အဲဒါတွေကို ကျွန်တောမျိုးရဲ့ ကိုယ်ထဲ ထည့်ပေးလိုက်ပါ၊ သူ့ကို ချောမောလှပတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဖြစ်အောင်သာ ဖန်တီးပေးတော်မူပါ ” လို့ ကိုယ်ပန်ကြားခဲ့တယ်။
သည်စကား ကြားတော့ ဖရွမ်တီယဲ မျက်လွှာလေးပင့်၍ ကြည့်သည်။ သူမအာရုံထဲတွင် ရှေးအတိတ်က တွေ့ခဲ့ဖူးသည့် မိုးဇက်၏ ရုပ်သွင်ကို ပြန်လည် အမှတ်ရသလို မြင်လာသည်။ မိုးဇက်ထဲ သူမ၏ လက်ကို ဆန့်တန်း၍ ပေးလိုက်သည်။ ထို့နောက်မူ ခင်ပွန်းသည်အား တကယ်ပင် ချစ်ခင်စုံမက်သည့် ထာဝရကြင်ဖက်ဖြစ်သွားခဲ့လေသည်။
မူရင်း။ ။ Barry and Joyce Vissell တို့၏ True Love.
နှလုံးသား အာဟာရ စာအုပ်မှ…
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 4:09 AM0comments Links to this post
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 8:10 PM0comments Links to this post
ဟာသလေး တွေ မရောက်တာ ကြာတာနဲ့..ဟာသလေးတွေ ကို မတင်ဖြစ်ဘူး ဖြစ်နေတာ. အခု မေးထဲ နောက်ထက်ရောက်လာတဲ့ ဟာသလေး တွေ ကို ထပ်ဆင့် မျှဝေပေးလိုက်တယ်နော်...........
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်က သားဖြစ်သူကို ပညာပေးနေသည်။
"စစ်မှန်တဲ့ စီးပွားရေးသမား ဆိုတာဟာ အလုပ်မှာရော၊ အိမ်မှာ ပါ အကျင့်သိက္ခကို
စောင့်ထိန်းရတယ်။ ဆိုကြပါစို့။ အဖေ့ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် တစ်ဦးဟာ အဖေ့ကို
အကြွေးတစ်သိန်းပေးစရာရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် မှားပြီး သူ အဖေ့ကို နှစ်သိန်းပေးမိတယ်။ ဒီမှာ
ဆုံးဖြတ်စရာ ဖြစ်လာပြီ။ ပိုရတဲ့ငွေကို မင်းအမေ လက်ထဲ အပ်လိုက်ရမလား။ ဒါမှ မဟုတ်
ရုံးစာရေးဖြစ်သူ အလုပ်ထဲ ထိုင်ပြီး တွေးနေ ငေးနေသည်ကို မြင်ရာ ¤င်းအား
ကျီစယ်လိုသည့်စိတ် ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွင် ပေါ်လာသည်။ သို့နှင့် ပြောသည်။
"မင်း အခုဘာတွေးနေသလဲဆိုတာ ငါ့ကို ပြောပြရင် ငွေတစ်ရာပေးမယ်"
စာရေးက အလန့်တကြား ပြန်ပြောသည်။
"ဟာ မလုပ်ပါနဲ့ ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော့်အတွေးဟာ ဘာတန်ဖိုးမှ မရှိပါဘူး"
"ဟုတ်ကဲ့။ လူကြီးမင်းအကြောင်းကို တွေးနေတာပါခင်ဗျာ"
အစမ်းစာမေးပွဲ၌ သမိုင်းဘာသာရပ်တွင် ၂-မှတ်သာ ရသဖြင့် ၃-တန်းကျောင်းသား
သားငယ်ကို အဖေက မေးသည်။
"သား။ ဘာဖြစ်လို့ သမိုင်းဘာသာရပ်မှာ ၂-မှတ်တည်း ရတာလဲကွ"
"သားမမွေးခင်က အကြောင်းတွေကို မေးတာကိုး အဖေရဲ့။ ၂-မှတ်ရတာတောင်
ပီတာလေး နေမကောင်း ဖြစ်သည်။ ဘေးအိမ်က ၄င်း၏ကစားဖော် ချာတိတ် ရောက်လာသည်။
ပီတာ မပြင်းရအောင် အကြာကြီး ထိုင်စကားပြောသည်။ တက်နိုင်သမျှ ပြုစုသည်။
ဤသည်ကို ကြည့်ပြီး ပီတာအမေ၏ ရင်ထဲ ပီတီဖြစ်သည်။ ချာတိတ်ကို
ကျေးဇူးတင်သွားသည်။ သို့နှင့် ချာတိတ် ပြန်မည် လုပ်သောအခါ ချာတိတ်ကို ချောကလက်
လက်ဆောင်ပေးသည်။ ချောကလက်ကို ယူပြီး ချာတိတ်က မမျှော်လင့်ဘဲ ပြောလိုက်သည်။
"အန်တီ၊ ပီတာသေရင် သူ့စက်ဘီးကို ကျွန်တော် ယူလို့ရမလားဟင်"
ချာတိတ်။ မင်းအသက် ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ"
"မင်းဘေးနားက ချာတိတ်မလေးရော။ သူ့နဲ့ မင်း ဘာတော်လဲ"
"သူ့နာမည် ဒေစီ။ ကျွန်တော့် အစ်မ။ အခု သူ ကျွန်တော့်ထက် အသက် ၂-နှစ်ကြီးတယ်။
ဒါပေမယ့် နောက်သုံးနှစ်ကြာရင် သူ့ထက် ကျွန်တော် တစ်နှစ် ကြီးသွားလိမ့်မယ်"
"ကလေးတို့ရေ၊ တို့တစ်တွေ အပေါ်ကို မော့ကြည့်ရင် ဘာကို မြင်ရမလဲကွယ်"
အမေဖြစ်သူ စိတ်ဆိုးဆိုးနှင့် သား၏နားရွက်ကို ဆွဲလိမ်သည်။ တံမြက်စည်းကို ယူပြီး
သားမိုက်ကို ဆုံးမရန် ပြင်သည်။
"လာခဲ့။ ဒန်အိုးကို ကြိုးနဲ့ ကြောင်ရဲ့ အမြီးသွားချည်သတဲ့။ နင့်ကို မှတ်လောက်
သားလောက်အောင် ဆုံးမရမယ်။ လာခဲ့စမ်း။"
ချာတိတ် ငိုငိုမဲ့မဲ့ နှင့် ပြန်ပြောသည်။
"မေမေကလည်း တခြားအိမ်က ကြောင်ပဲ ဥစ္စာ"
"ဒါပေမယ့် အိုးက တို့အိမ်က အိုးဟဲ့"
လမ်းသွားလမ်းလာများကို အမျိုးမျိုး နောက်ပြောင်ပြီး အနှောင့်အယှက်ပေးသော ချာတိတ်ကို
ရဲသား ဆွဲခေါ်လာသည်။ ချာတိတ်၏အိမ်သို့ ရောက်သောအခါ ရဲသားက
ဘဲလ်တီးလိုက်သည်။ ချာတိတ်၏ အဖေ တံခါးကို ဖွင့်ပေးသည်။
"ဟုတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်တစ်နာရီ ကြာမှ ခေါ်လာခဲ့ပါလားဗျာ။ အိမ်မှာ ဧည့်သည်တွေ
အိမ်ထောင်စုတွင် အမြွာပူးမွေးသည်။ မိဘနှစ်ပါးစလုံး ဝမ်းသာနေကြသည်။ ငါးနှစ်သား
ပီတာလေးသည် ညီနှစ်ယောက်ကို အကြာကြီး ကြည့်သည်။ ထို့နောက် မိဘများကို
"သူတို့ နှစ်ယောက်လုံး ဒီမှာ နေမှာလား။ ဒါမှ မဟုတ် ကြိုက်တာ တစ်ယောက်ကို ရွေးဖို့
အလွန်ဝသော မိန်းမကြီးတစ်ယောက် လမ်းလျှောက်လာသည်။ ¤င်း၏နောက်မှ
ချာတိတ်တစ်ယောက် ထပ်ကြပ်မကွာ လိုက်လာသည်။ တစ်နေရာတွင် မိန်းမကြီး
နောက်ဘက်လှည့်ပြီး ချာတိတ်ကို မေးသည်။
"ဟေ့၊ ချာတိတ်။ မင်း ငါ့နောက်ကို ဘာဖြစ်လို့ လိုက်နေတာလဲ။ ဘာလိုချင်လို့လဲ"
"ဘာမှ မလိုချင်ပါဘူးခင်ဗျ။ လမ်းပေါ်မှာ နေ အင်မတန်ပူတယ်။ ကျွန်တော်က အရိပ်မှာပဲ
ည ၂-နာရီ အချိန်တွင် ဆရာဝန်ကြီး၏အိမ်၌ တယ်လီဖုန်းသံ မြည်လာသည်။
လူတစ်ယောက် အသည်းအသန် ဖြစ်နေ၍ အမြန်ဆုံးလာစေလိုကြောင်း ဆက်သူက
ပြောသည်။ မဖြစ်ဖြစ်လာပါရန် ဆက်သူက အနူးအညွှတ်တောင်းပန်သည်။ ညအချိန်မတော်
ဖြစ်နေရုံမက အပြင်ဘက်တွင် မိုးကလည်း အသည်းအသန် ရွာနေရာ ဆရာဝန်ကြီး
မသွားလိုချေ။ ပြီးတော့ လူနာ၏အိမ်က မြို့စွန်တွင် ဖြစ်နေသည်။ သိုသော် မတက်နိုင်။
လူတစ်ယောက်၏ အသက်ကို ကယ်ရမည့် ကိစ္စဖြစ်နေသည်။
လူနာ၏ အိမ်သို့ ဆရာဝန်ကြီး ခဲခဲယဉ်းယဉ်းနှင့် ရောက်လာသည်။ အိပ်ရာထဲတွင်
ညည်းတွားနေသော လူကြီးတစ်ယောက်ကို တွေ့သည်။
"ဒေါက်တာရယ်၊ ကျွန်တော်ကို ကယ်ပါဦး။ ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော်
မကြာခင်သေရတော့မယ်လို့ ထင်နေတယ် ခင်ဗျ"
"မတော်တဆ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာ ဖြစ်ဖူးသလား"
လူနာကို ခဏမျှ စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီးသောအခါ ဝမ်းနည်းသော အသံဖြင့် ဆရာဝန်က
"ခင်ဗျား သေတမ်းစာ ရေးပြီးပလား"
"ဒေါက်တာ။ ဘာလဲ။ ကျွန်တော် တကယ်ဘဲ သေတော့မယ်လို့ ဒေါက်တာ ဆိုလိုချင်တာလား
ဟင်။ ဟင့်အင်း။ ဟင့်အင်း။ကျွန်တော် မသေချင်သေဘူး ဒေါက်တာ။ ကျွန်တော့် အသက်ကို
"ခင်ဗျားဆီမှာ သားသမီးတွေ ရှိလား။ သူတို့ကို အခုချက်ချင်း ခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါ။ ပြီးတော့
ဆွေမျိုးတွေလကိုပါ ခေါ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့"
"ဘုရား။ ဘုရား။ ကျွန်တော် တကယ်သေမှာလား ဆရာရယ်"
"မသေပါဘူး။ ခင်ဗျားရဲ့ ကျန်းမာရေးဟာ ကျွဲရိုင်းကြီး တစ်ကောင်လို
ကောင်းနေပါသေးတယ်။ အဲ ဒါပေမယ့် ဒီလို ရာသီဥတုနဲ့ ဒီလို အချိန်မျိုးမှာ
ကျုပ်တစ်ယောက်တည်း အရူးလုပ်ခံရတာမျိုး အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဗျ။ နားလည်လား"
ရန်သူ၏ လက်ချက်ကြောင့် ခြေထောက်တွင် ဒဏ်ရာရသော စစ်ဗိုလ်ကို စစ်ဆေးရုံသို့
သယ်ဆောင်လာသည်။ ရောက်ရောက်ချင်း ¤င်းကို ခွဲစိတ်ခန်းထဲ သွင်းပြီး ခွဲစိတ်ရန်
ပြင်ဆင်ကြသည်။ နှစ်နာရီခန့် ကြာသွားသည်။ စစ်ဗိုလ်က သည်းမခံနိုင်တော့ဟန်ဖြင့်
"ခင်ဗျားတို့ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်တောင် ကြာနေရတာလဲ။ ဘာကို ရှာနေကြတာလဲ။
ဒဏ်ရာအပေါက်က သေးသေးလေး။ ဆယ်မိနစ်ချုပ်ရင် ပြီးတဲ့ ကိစ္စ "
"ကျွန်တော်တို့ ကျည်ဆန်ကို ရှာနေကြတာဗျ"
ဤစကားကို ကြာသော် လူနာစစ်ဗိုလ် ပေါက်ကွဲတော့သည်။
"စောစောက ပြောပါတော့လား။ ကျည်ဆန်က ကျွန်တော့် အိပ်ထောင်ထဲမှာ။ ရော့"
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 4:17 AM0comments Links to this post
အလွမ်းက တစ်ပွင့် နှစ်ပွင့်....နဲ့ခြောက်ကပ်
ငါက ဖျားနာမှုကိုမှ တွယ်တာတတ်သူပါ....။
လာ၊ မြန်မြန်သာ ဝင်ခဲ့ပါတော့။
လူ ၈ဝ% ကအလုပ်လုပ်တယ်၊
ဒါပေမယ့်၊ ကျန်တဲ့လူ၂ဝ%က ဆုရတယ်
သူတို့ကို ရယ်ရယ်မောမောနဲ့သာ ထိုင်ကြည့်မိ
သွေးအေးအေး ရက်စွဲတွေကိုသာ အသိအကျွမ်းဖွဲ့နေခဲ့တယ်…။
ငါဟာ “တေလေ” ပါ။
ကောင်းကင်မှာ တိမ်တွေက အပြာနုနု
အရပ်ပုပု ကောင်မလေးတစ်ယောက် လမ်းလျှောက်လာနေတယ်၊
ကယောင်ကတမ်းနဲ့ အရောင်ကန်းတဲ့ အိပ်မက်တွေ ငါမက်နေမိ၊
ဒါပဲ တတ်နိုင်တာမို့ လွမ်းပါရစေ.......။
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 3:26 AM0comments Links to this post
သင့်မျက်စိကို ပန်းတိုင်မှ လွှဲဖယ်လိုက်စဉ်
မြင်ရတက်သည့် ကြောက်မက်ဖွယ်ရာတို့ကို ဆိုပေသည်။
*ဖရက်(ဒ)အက်စတယ် ရုပ်ရှင်ရိုက်ရန်အတွက် စမ်းသပ်ခံသည့်အခါ အမ်ဂျီအမ် ရုပ်ရှင် ကုမ္မဏီမှ စစ်ဆေးသူက " သရုပ်မဆောင်တက်၊ ထိပ်နည်းနည်းပြောင်သည်၊ အနည်းအကျဉ်းသာ ကတက်သည်" ဟူ၍ မှတ်ချက်ပေးသည်။ အဲသည် မှတ်ချက်ပေးတုန်းက ၁၉၃၃ ခုနှစ်။ အဲသည်နှစ်မှာပင် သူနာမည်စ ရသည်။ သည်နောက်တော့ ဟောလိဝုဒ်မှာ အကျော်ကြားဆုံး ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာသည်။ ကမ္ဘာမှာအက အကောင်းဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ဟု ချီးမွမ်းပြောဆိုခြင်း ခံရသည်။
အက်စတယ်က အမ်ဂျီအမ်မှ..မှတ်ချက်ကို သူ့အိမ်ရှိ မီးလင်း ဖိုထိပ်တွင် အမှတ်တရ ချိတ်ဆွဲထားခဲ့သည်။
*ကျွမ်းကျင်သ ဆိုသော ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက်က ဗင်းဆင့်လွန်ဘာဒီ သည် ဘောလုံးပညာ မည်မည်ရရမတက်၊ စိတ်အားထက်သန်မှုလည်း မရှိဟု မှတ်ချက်ချခဲ့သည်။
*ဆော့ခရတ္တိ အား လူငယ်များ ကိုစာရိတ္တ ပျက်စေသူဟူ၍ မလိုသူတို့က စွပ်စွဲခဲ့ဖူးသည်။
ဆော့ခရတ္တိ၏ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ သြ၀ါဒများကို ယနေ့တိုင် ကမ္ဘာက ဆည်းပူးရဆဲ ဖြစ်သည်။ ပလေတို၊ အရစ္စတိုတယ်စသည့် ဆော့ခရတ္တိ၏ တပည့်စဉ်ဆက်တို့သည် ဥရောပနှင့်တကွ ကမ္ဘာကိုပါ အသိ ပညာ ဖြန့်ဖြူးပေးဝေသည့် ပညာရေးသမားကြီးများ ဖြစ်ခဲ့သည်။
* ပီတာဂျေ ဒင်နီယယ် စတုတ္တတန်းမှာ.. ရှိစဉ်က သူ့ဆရာမ မစ္စစ် ဖိလစ်(ပ)(စ)က....
" ပီတာ ဂျေ ဒင်နီယယ်၊ မင်းဟာ အလကား အသုံး မမျတဲ့ ပန်းသီးပုပ်ပဲ၊ ဘယ်တော့မှ ဘာမှ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး " ဟူ၍ အမြဲပြောလေ့ရှိခဲ့သည်။
ပီတာသည် အသက် ၂၆ နှစ်အထိ စာလုံးဝ မတက်သလောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် သူအားသူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က နပိုလီယန်ဟေးလ်၏ အကြံဥာဏ်ဖြင့် ကြီးပွားရေး စာအုပ်ကို ညလုံးပေါက် ဖတ်ပြပြီးသည့်နောက်တွင် သူ့ဘ၀ ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ ယခုအခါ၌ သူသည် ယခင် သူအမြဲရန်ဖြစ်လေ့ ရှိခဲ့သည့် လမ်းဆုံးလမ်းခွများကို ပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိခဲ့သည်။ စာလည်း ကောင်းစွာ တက်မြောက်ခဲ့ရုံမက စာအုပ်စာတမ်းများပင် ရေးသား ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့သည်။ သူ၏ နောက်ဆုံး ထုတ်စာအုပ် မှာ Mrs. Phillips , You Were Wrong! ( ဆရာမ ပြောတာ မှားသွားပြီ) ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
* လူဝီဆာ မေ အယ်လကော့ (တ) အား သူမ၏ မိသားစူက အပ်ချုပ်သမ အလုပ်၊ အိမ်ဖော်အလုပ်များ လုပ်ရန် တိုက်တွန်းခဲ့ကြဖူးသည်။
လူဝီဆာသည် Little Women ၀တ္ထုအပါအ၀င် လူငယ်စာပေ အများအပြား ရေးသား ပြုစုခြင်းဖြင့် ထင်ရှားသော စာရေးဆရာမ တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။
*ဘေထိုးဗင် သည် တယောကို အချိုးတကျ မကိုင်တက်ခဲ့၊ ထို့ပြင် တေးဂီတနည်းစနစ်များ ကျွမ်းကျင်အောင် လုပ်ဖို့ထက် ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် ရေးဖွဲရန်သာ အားသန်နေတက်သည်။ ပြီး သူ့ ဆရာကလည်း သူ့အား တေးဂီတ ရေးဖွဲ့ သီကုံးသူ ( composer) တစ်ဦးဖြစ်ဖို့ မျှော်လင့်ချက် မရှိဟု ဆိုခဲ့သည်။
သို့သော် နောင် တစ်နေ့၌ ဘေထိုးဗင်သည် ကမ္ဘာ့တေးဂီတ သမိုင်း တွင် အထင်ရှားဆုံး ပါရမီရှင်၊ ပညာ ရှင်ကြီး တစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။
* အင်နရီကို ကာရူဆို အား မိဘများ အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်စေချင်ကြသည်။ သူ့ဆရာကလည်း သူ့မှာ အသံမရှိ၊ သီချင်းဆိုသမား မဖြစ်နိုင်ဟု မှတ်ချက်ချသည်။
ကာရူဆိုသည် ၂၀ ရာစုနှစ်၏ အထင်ရှားဆုံး အဆိုတော် တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
* အီဗော်လူရှင်း သီဝရီ၏ ဖခင်ကြီး ချားလ်(စ)ဒါဝင် သည် သူ့ဆရာများနှင့် သူ့ဖခင် ကိုယ်တိုင်က ဥာဏ်ရည်နိမ့်သူတစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
*ဖန်တီမှု အနုပညာလောကတွင် ထိပ်သီး တစ်ဦးဖြစ်လာသော ဝေါ့ဒစ္စနေ သည် စိတ်ကူဥာဏ် ခေါင်းပါးသည်ဟူသော မှတ်ချက်ဖြင့် သတင်းစာအလုပ်မှ ထုတ်ပယ်ခြင်းခံရဖူးသည်။ ထို့ပြင် ကလေး လူကြီးတကာတို့ လာရောက်လည်ပတ်ကြသော ဒစ္စနေ အံ့ဖွယ်ကမ္ဘာ လုပ်ငန်းကြီး အောင်မြင်စွာ မတည်ထောင်နိုင်မီစီးပွား အကြိမ်ကြိမ် ပျက်ခဲ့ဖူးသည်။
*ဓာတ်စက်၊ လျှပ်စစ်မီးသီး စသည်တို့အပါအ၀င် တီထွင်မှုပေါင်း ၁၃၀၀ မျှပြုလုပ်ခဲ့သည့် သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး အက်ဒီဆင် အား သူ့ဆရာများက အလွန်ထုံထိုင်းသူ၊ ဘာစာမျှသင်၍ မရသူဟူ၍ မှတ်ချက်ချဖူးခဲ့သည်။
*နှစ်ဆယ်ရာစု၏ အကြီးကျယ်ဆုံး သိပ္ပံပညာ ကျော် အယ်လဘက်အိုင်စတိုင်း သည် အသက် ၄နှစ်အရွယ်ထိ စကား မပြောတက်ခဲ့။ အသက် ၇ နှစ်သားအထိစာမဖတ်တက်ခဲ့။ သူ့ဆရာကလည်း သူ့အား ဦးနှောက်လေးသူ၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးချို့တဲ့သူ ဟူ၍ မှတ်ချက်ချခဲ့သည်။
*ဓာတုဗေဒ နှင့် ပိုးမွှားဗေဒ ပညာရှင်ကြီး လူဝီပါစတာ သည်လည်း ကျောင်းနေစဉ်က သာမန်မျှသာ ဖြစ်ပြီး နောင်တွင် ပါရဂူတစ်ဆူ ဖြစ်လာမည့် ဓာတုဗေဒဘာသာရပ်၌ပင် ကျောင်းသား ၂၂ယောက်ထဲတွင် အဆင့် ၁၅ ရှိခဲ့သည်။
*ရူပဗေဒ ပညာနယ်ပယ်၌ ကြီးကျယ်လှသော သဘောတရားသစ်များကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သူ ၁၈ ရာစု အင်္ဂလိပ်တွေးခေါ်ရှင် သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး အိုက်ဇက် နယူတန် သည်လည်း အခြေခံပညာအတင့်တွင် အလွန်စာညံ့သူ တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။
* `တွေးတောသူ` ပန်းပုရုပ်ဖြင့် ကမ္ဘာသိ ထင်ရှားသူ ပန်းပုဆရာကြီး ရိုဒင်အား သူ့ဖခင်က ငါ့မှာ ကျပ်မပြည့်တဲ့ သားတစ်ယောက် မွေးထားရတယ်ဟု ပြောဖူးသည်။ ရိုဒင်သည် အနုပညာကျောင်းသို့ ၀င်ခွင့်လျှောက်ထားရာ သုံးကြိမ်တိတိ အပယ်ခံရသည်။ သူ့ဦးလေးက မူ ဒီကောင်က ဘာပညာမှ သင်လို့မရဘူးဟူ၍ မှတ်ချက်ချသည်။
* `စစ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး` ၀တ္ထုကြီးဖြင့် ကမ္ဘာက လေးစားရသော ရုရှားစာရေးဆရာကြီး တော်စတွိုင်း သည် ကောလိပ်ကျောင်းမှ တစ်ဝက်တစ်ပျက်နှင့် ထွက်ခဲ့ရသူ ဖြစ်သည်။ သူ့အား စာသင်၍မရ၊ စာသင်ချင်စိတ်လည်း သူ့မှာ မရှိဟူ၍ မှတ်ချက်ချခြင်းခံရသည်။
*မော်တော်ကား ပညာရှင် အမေရိကန် စက်မှုလုပ်ငန်းရှင် သူဌေးကြီး ဟင်နရီဖို့ဒ် သည် အကြီးအကျယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝသည့်အဆင့်မရောက်မီက ငါးကြိမ်တိတိစီးပွား ပျက်ခဲ့ဖူးသည်။
* နှစ်ဆယ်ရာစု ပထမပိုင်းကာလ၏ အထင်ရှားဆုံး လူသားတစ်ဦး အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရသူ ဆာဝင်စတန် ချာချီ သည် ခြောက်တန်းတွင် စာမေးပွဲကျခဲ့သည်။ဘ၀သက်တမ်း တစ်လျှောက်လုံးလည်း နိုင်ငံရေး နယ်ပယ်တွင် ရှုံးပွဲတွေ အလီလီ ဆင်နွှဲခဲ့ရပြီး အသက် ၆၂ နှစ်တွင် မှ ဗြိတိသျှဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးကို ရရှိခဲ့ဖြင်း ဖြစ်သည်။
*`ယောနသံစင်ရော်` ၀တ္ထုဖြင့်ကမ္ဘာကျော်ခဲ့သည့် စာရေးဆရာ ရစ်ချတ်ဘတ်(ခ)သည် အစပိုင်းက သည် ၀တ္ထုလေး တပိုက်ပိုက်နှင့် စာအုပ်တိုက်တကာ လည်ခဲ့ရသည်။ ထုတ်ဝေသူ ၁၈ ဦးတိတိက သူ့စာအုပ်ကို ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင်မှ မက္ကမီလန် စာအုပ်တိုက်မှ လက်ခံထုတ်ဝေခဲ့ရာ အကြီးအကျယ် အောင်မြင်ကျော်ကြားသွားခဲ့ပြီး နောက်ငါးနှစ်အတွင်း အမေရိကန် တစ်ပြည်တည်းမှာပင် စောင်ရေ ၇သန်းကျော် ရောင်းချခဲ့ရသည်။
* အလားတူ အလားတူ အဲသည်လို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရပ်မျိုးတွေ အများအပြား ပင် ရှိပါသည်။
ထို့ကြောင့် အကယ်၍ သင့်မှာ လောလောဆယ် မအောင်မြင်မှု၊ ဆုံးရှုံးမှု၊ အရေးနိမ့်မှုများ ကြုံနေရသည် ဆိုငြားအံ့၊ ထိုအတွက် စိတ်ပျက်လက်လျှော့လိုစိတ်များ လည်း ဖြစ်ပေါ်မယ် ဆိုငြားအံ့၊ သည်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းတွေးကာ၊ ထို့နောက် သူတို့အကြောင်းတွေ အသေးစိတ်လိုက်လံလေ့လာကာ၊ စိတ်သစ် အားသစ်တွေ မွေးပြီး ကြိုးစားကြည့်စမ်းပါဟု အကြံပေးလိုက်ချင်ပါသည်။
မူရင်း။ ။ Jack Canfield နှင့် Mark V. Hansen တို့၏ Consider This.
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 3:15 AM 88 comments Links to this post